သာသာယာယာ ငါတို ့ရွာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » သာသာယာယာ ငါတို ့ရွာ
သာသာယာယာ ငါတို ့ရွာ
Posted by ေမာင္ ေပ on Oct 10, 2011 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, Short Story | 34 comments
ဘယ်လို ဝမ်းနိုက် လဲ ဆိုတော့ လပြည့်ည ကြီး …
ဘယ်လို လပြည့်ညကြီး လဲ ဆိုတော့ တစ်ရွာလုံး ဆူညံနေအောင် ဗြောက်တွေ ဖောက်တဲ့ ဆူဆူပူပူည …
ဘယ်နေရာတွေ ဆူပူနေလဲ ဆိုတော့ ရွာရဲ ့အနောက်မြောက်ပိုင်းတွေ မှာ …
ကြာပါပြီလေ…မောင်ပေ တို ့ရွာ ဆူဆူပူပူညံနေခဲ့တာ တွေဟာ ။
ဒီလပြည့်ည မတိုင်ခင် ကတည်း ကို က ၊ ရွာအနောက်မြောက်ပိုင်း က လူတွေ ဗြောက်အိုး အရမ်းဖောက်နေခဲ့ကြတာမလား ။
သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ဆိုရင် နားပူလွန်းလို ့၊ တစ်ခြားကို ခဏပြောင်းရွှေ ့တဲ့သူလဲ ရွှေ ့ကုန်ကြတာပေါ့ ။
သူတို ့ဟာ တွေ က လဲ လွန်ပါတယ် ၊ မသိရင်..ဓါးပြပဲ တစ်ကယ်ဝင်တိုက်အနုကြမ်းစီးနေသလိုလို ။
နောက်ရှိသေးတယ် ၊ အဲဒီကိစ္စ က ပိုဆိုးတယ် ။ ရွာထဲက တစ်ဦးတည်းသော ခေတ်သစ် ချစ်တီး ရဲ ့ပြဿနာ ။ အမှန်က သူ က ဗမာ ပါ ။
သူ ့အလုပ်က ငွေတိုးချေးစား တာရယ် ၊ သူ ့အသားရေ က ကပ္ပလီ နီဂရိုးလို မဲပြောင်လွန်းလို ့ရယ် နဲ ့၊ သူ ့ကို ခေတ်သစ် ချစ်တီးလို ့ပဲ ခေါ်ကြတယ် ။
သူကလဲ ကျေနပ်ပါတယ် တဲ့ ၊ သူ ့ဆီက ပိုက်ဆံချေးသူတွေ သာ အတိုးမှန်မှန်ပေး ၊ ငွေမှန်မှန်ပြန်ဆပ် ရင် ခေါ်ချင်သလိုခေါ်ကြ ပါစေတဲ့ ။
သူက ပိုက်ဆံတော်တော်ရှိတော့ ၊ ညီမ သုံးယောက် ကို တစ်ပြိုင်တည်း ယူထားတယ် ။
အဲသူယူထားတဲ့ဟာက မှ တစ်ကယ့် ကုလားမ တွေ ၊ ညီမသုံးယောက်လုံးကို တစ်အိမ်ထဲ အတူပေါင်းထားတယ် ။
နောက်ပြီး သူ ့အိမ် က ခြေတံရှည် အိမ်ကြီး ဆိုတော့ အောက်ထပ် မှာ ကြက်တွေ ၊ ဝက်တွေ မွေးထားသေးတယ် ။ စီးပွားရေး အကွက်မြင်တာပေါ့လေ ။
သူ ့ပြဿနာ က ဘယ်လို လဲ ဆိုတော့ ၊ တစ်ရက် မှာ သူ ့ကြက်ဝက် အကောင်ရေ ပြန်စစ် ကြည့်တော့ လျော ့နေတယ် ။
ဒါနဲ့သူခိုးတော့ ရှိနေပြီပေါ့လေ ၊ သူကြီးတိုင်ရင် လက်ဆောင်လေး ဘာလေး ပေးနေရမှာ စိုးတာနဲ ့၊ ကိုယ်တိုင် စောင့်ဖမ်းတယ် ။
သူမစောင့်နိုင်တဲ့ ညဆိုရင် သူ ့မယားသုံးယောက် ကို အလှည့်ကြ ဆင်းစောင့်ခိုင်းတယ် ။
ရွာထဲက ကာလသားတွေ ထံမှာတော့ စနည်းသွားနာတယ် ။ တိုးတိုးတိတ်တိတ် သတင်းလွှင့်တယ် ။
သူတစ်ပါး ပစ္စည်းဥစ္စာ ကို ခိုးယူတာဟာ ငရဲရောက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ၊ မကောင်းဘူး ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပေါ့
ဒါပေမယ့် မမိပါဘူး ၊ အဲ…သူခိုးက ပိုဆိုးလာတယ် ။ ခိုးရုံတင်မက စာတောင် ပစ်ခဲ့သေးတယ် ။ ဘာလဲဆိုရင်
“ စားချင်လို ့ခိုးတာဖြစ်ကြောင်း ၊ ဘာငရဲ မှ မရှိကြောင်း ၊ ရအောင် ယူနိုင်ရင် စားရမှာ ဖြစ်ကြောင်း ၊ နောင်လည်း ဒီထက့်မက ခိုးသွားဖို ့အစီအစဉ်ရှိကြောင်း ”
စာဖတ်ပြီးတော့ ချစ်တီး တော်တော် ဒေါသထွက်သွားတယ် ။ သူခိုးပုံကြည့်ရတာ ဘာသာမဲ့ကောင် ၊ ဘာကိုးကွယ်တဲ့ကောင်မှန်းကို မသိတော့ဘူး ။
ဒါနဲ ့သူကြီးကို သွားတိုင်ရတော့တယ် ။ သူခိုးပူနေပြီ ဆိုတာ သိသွားတဲ့ သူကြီးလည်း ရွာပတ်ပတ်လည်ကို ခြံစည်းရိုး ကာလိုက်တယ် ။
ပြီးတော့ ဆယ်အိမ်မှူးတွေ ကို ခေါ်ပြီး အလှည့်ကျ ကင်းစောင့်စေတယ် ။
ချစ်တီး အိမ်မှာ အခိုးခံရတာ မရှိတော့ဘူး ၊ အခြေအနေ ပြန်ငြိမ်သွားတယ် ။ ဒါပေမယ့် ချစ်တီးကတော့ ညစဉ် အိမ်အောက်မှာ ကင်းစောင့်နေမြဲပဲ ။
သူ စောင့်လိုက် ၊ သူ ့မိန်းမ သုံးယောက် အလှည့်ကျ စောင့်လိုက်နဲ ့ပေါ့ ။
အဲဒီမှာ တစ်ရက်ကြ ချစ်တီးတို ့အိမ်က ဝက်တစ်ကောင် သေသွားလို ့၊ အသားပေါ် စားကြတယ် ။
စားကောင်းကောင်းနဲ ့စားလိုက်တာ ၊ ချစ်တီးတို ့လင်မယားတွေ စားပြီး အဲ့ညမှာ ပိုးစိုးပက်စက် အိပ်ပျော်ကုန်ကြတယ် ။
အငယ်ဆုံး မယားလေး ပဲ ၊ အလိုက်တသိ နဲ့အောက်ဆင်း ပြီး ခြံစောင့်လုပ်ရှာတယ် ။ အဲဒီမှာ သူ အမှားကြီး မှားခံလိုက်ရရှာတော့တာပဲ ။
နောက်နေ ့မနက် ၊ ချစ်တီး အိပ်ယာနိုးတော့ ၊ အိမ်အောက်မှာ တစ်ရှုံ ့ရှုံ ့လေး ထိုင်ငိုနေတဲ့ သူ့မယားထွေးလေး ကို တွေ ့လိုက်ရတော့တယ် ။
လက်ထဲမှာ လည်း စာရွက်လေး ကိုင်ထားတယ် ။ ချစ်တီး လည်း ပြူးတူး ပြဲတဲ နဲ ့စာကို ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့
“ လုံခြုံရေး ထူထပ်နေသဖြင့် ၊ ကြက်ဝက်များကို ခိုးရန်မလွယ်ကူသောကြောင့် ၊ ရှိသော မယားလေးကို ပဲ ကျေနပ်သွားပါကြောင်း ၊ သည်အတွက် ကျွန်တော်တို ့မှာ ဘာအပြစ်မှ ဖြစ်မှာ မဟုတ်တာကို သိရှိစေလိုကြောင်း ၊ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ကျွန်တော် တို ့အပြာသမား များမှာ သည်လို များများလုပ်လေ အကျိုးများများ ရှိလေ ဖြစ်ကြောင်း ၊ အရမ်းအရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ၊ နောက်ရက်များ တွင် ၊ သည်မယားကို ထပ်မစောင့်စေပဲ ၊ ကျန်မယား များ ကို အလှည့်ပြောင်း စောင့်ပေးစေလိုပါကြောင်း ” တဲ့…
ချစ်တီး ဒီတစ်ခါ တော့ ဘယ်လို မှ သည်းမခံ နိုင်တော့ ၊ သည်ကောင်တွေ ဘယ်လိုကောင်တွေ လဲ ၊ ဘုရားတရား မရှိတာတော့ သိသည် ။
အပြာကောင်တွေ တော်တော် ဆိုးလာပြီ ဟု အရမ်းစိတ်ဆိုးသွားကာ ၊ သူကြီး ဆီသို ့ပြေးတိုင်ပြန်သည် ။
သူကြီးလည်း မဖြစ်ချေတော့ ဆိုကာ ၊ ညကင်းကို တစ်ယောက်ပဲ စောင့်စေခဲ့ရာမှ ၊ တစ်ညလျှင် ကင်း သုံးယောက် အထိ ထပ်တိုးစောင့်ရန် ညွှန်ကြားလိုက်လေတော့သည် ။
အဲဒီမှာ ကျွန်တော် မောင်ပေ အစမှာ ရေးခဲ့တဲ ၊ လပြည့်ည ကြီး ပေါ့ …
ကိုဘီလူး ရယ် ၊ ပေါက်ဖော် ရယ် ၊ မောင်ပေ ရယ် သုံးယောက် သား ကင်းစောင့်ဖို ့တာဝန်ကြ လာလို ့၊ ရွာအဝင်လမ်း ခြံစည်းရိုးနားက ကင်းစင်ပေါ်မှာ ရောက်နေကြတယ် ။
သုံးယောက်သား ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် တက်တက်ကြွကြွ နဲ ့စောင့်ရင်း သောက်ရင်း လုပ်နေကြတယ် ။ ပုလင်းတွေကို ပုံနေတာပဲ ။
ရွာထဲက လူတွေ က ကင်းသမား တွေ ကို ဆပ်ပလိုင်းပေးထားတယ် လေ ၊ အမြည်းကလဲ ဘာကောင်းသလဲ မပြောပါနဲ့။
ရွာထဲက လယ်ကြွက်ဖမ်းရောင်းသူ ဦးကြောင်ကြီး ဆပ်ပလိုင်းထားတဲ့ လယ်ကြွက်ကြော် ကြွပ်ကြွပ်လေး ၊ ပဲဆီနံ ့လေး မွှေးနေတယ် ။
ချစ်တီးကလဲ သူ ့ခြံထွက် ကြက်ဥတွေ ကို အပြုတ်တွေ ရော အကြော်တွေ ပါ ဆပ်ပလိုင်းထားတယ် ။
ဒါနဲ ့မောင်ပေတို ့သုံးယောက် ၊ ကင်းစောင့်ရင်း သောက်ရင်းစားရင်း စကားလေး တစ်ပြောပြောနဲ ့ပေါ့ ။
ဒီလိုနဲ ့…….ညသန်းခေါင်ယံ အချိန်ကို ရောက်လာတယ် ။ ဘီလူး၊မောင်ပေ၊ပေါက်ဖော် သုံးယောက် ငိုက်စတောင် ပြုနေပြီ ။
ရွာအဝင်လမ်း ဘက် ကို ရွာအပြင် ဘက်ကနေ တစ်လျက်လျက် နဲ့လူတစ်ယောက် လျှောက်လာတဲ့ ခြေသံကြားလိုက်ရတယ် ။
(လျက်လျက် ကို မြန်မာစာလုံးပေါင်းမှ ယူသုံးထားပါသည် ၊ ရွာထဲ မှ လက်သစ်တစ်ဦးက စာလုံးပေါင်း လိုက်စစ်နေသည် ကို မဖြေရှင်းချင်သဖြင့် )
ခြေသံရှင် က ရွာအဝင်တံခါး နား မရောက်ခင် မှောင်ရိပ်ထဲ တွင် ရပ်သွားသည် ။
ဘီလူး ၊ ပေါက်ဖော် ၊ မောင်ပေ တို ့လည်း သတိဝင်လာကြပြီး ၊ ဘီလူး က အော်မေး လိုက်တယ်
“ ဟေ့…ရွာဘက်ကိုလာနေတာ ဘယ်သူလဲ ဟေ့ ”
အမှောင်ထဲမှ ခြေသံရှင်ထံ မှ အသံထွက်လာတယ်
“ ကျွန်တော်..အဲလေ ယောင်လို ့..ကျွန်မ ပါ ဖြိုး ရယ်ပါ ”
“ ဘယ်က ဖြိုးလဲ ၊ စကားဝှက်ပြောစမ်း ”
( စကားချပ် ။ ရွာသာယာ ၏ လုံခြုံရေးစည်းကမ်းအရ စကားဝှက်များ ကို သူကြီးက သတ်မှတ်ထားသည်ကို ဂေဇက်ဝင်များ သိရှိပြီး ဖြစ်ပါသည် ။ ဂေဇက်ဝင်များ ရွာထဲသို ့ဝင်မည် ဆိုလျှင် ကိုယ့်နာမည် နှင့် password ဟု ခေါ်သော စကားဝှက်များ ကို ဖြေကြရသည် မဟုတ်ပါလော )
“ ကိုကာကိုလာ ၊ အပျိုလာ ဟိုမှာ ၊ ဆိုဗျာ လိုတာ ”
မောင်ပေ လည်း အံ့အားသင့်သွားပြီး ပေါက်ဖော် ကို တီးတိုး ပြောလိုက်သည် ။ “ သူ က စကားဝှက်တော့ မှန်အောင် ပြောနိုင်သား ဗျ ”
“ ဟဲ့..အခြောက်မ ဖြိုး လား ၊ နင့်ကို အရမ်း ရှုပ်လွန်း၊ ရွလွန်းလို ့သူကြီးနဲ ့ရွာလူကြီးတွေ က မောင်းထုတ်ပြီးသားမလား ၊ ဘာကိစ္စနဲ ့ညကြီးအချိန်မတော် ကာမှ လာရတာလဲ ”
အမှောင်ထဲမှ ဖြိုးဆိုသူ သည် ရွာခြံစည်းရိုး အပြင်ဘက် ၊ ကင်းစင် အောက်နား သို ့ဆတ်ကော့လတ်ကော့ ဖြင့် ထွက်လာပြီး…
“ အရင်လို မဟုတ်တော့ပါဘူး တော်တို ့ရယ် ၊ ရှင်တို ့တစ်ရွာလုံး က စစ်မှ ကြိုက်ကြတယ် ဆိုလို ့၊ ကျွန်မ ရှိတာလေး တွေ ပေါင်နှံ ရောင်းချ အရင်းလုပ်ပြီး ၊ ယိုးဒယားကို သွား ၊ ဖောင်းတန်ဖောင်း ၊ ဖြတ်တန်ဖြတ် ၊ ဖောက်တန်ဖောက် ၊ ချုပ်တန်ချုပ် ပြီးခဲ့လို့စစ်စစ် လေး ဖြစ်လာပါပြီ ရှင်တို ့ရေ…ဟီးဟီး ”
ပြောပြောဆိုဆို ဖြင့် ဖြိုးဆိုသူ သည် ဘီလူးတို ့ဘက်ကို ၊ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးများ လုပ်သလို ၊ တင်ပါးလေး နောက်ကော့ပြီး တစ်ပတ်လည် ပြလိုက်လေသည် ။
ဘီလူးတို ့လည်း “ ထွီ..ရွံတာ ၊ တော်စမ်းပါ အခြောက်မ ရယ် ၊ သွားသွား…နင် ့ကို ဒီရွာကနေ ရာသက်ပန် နှင်ထုတ်ပြီးသား ပဲ ၊ ဘာအကြောင်းနဲ ့မှ နင် ပြန်လာစရာ မရှိဘူး ၊ လစ်တော့လစ်တော့ ”
ပေါက်ဖောက် ကပါ ဝင်ပြောသည် ။
“ ကိုဘီလူး ပြောသလို ပဲ ၊ သွားတော့နော်..ငါ ကစိတ်အရမ်းဆတ်တာနော် ၊ ဟင်းဟင်း..အခုကို ယားလာပြီ ငါ့လက်က ၊ ပုလင်းနဲ ့ဝှီးလိုက်ရမလား ၊ လေးခွ ကြိုက်လား ”
“ အဲဒီလိုတော့ ဇွတ်မလုပ်ကြပါနဲ ့အကိုတို ့ရယ် ၊ ဟောဒီမှာ အကိုတို ့အတွက် ကျွန်မ ယူလာတဲ့ လက်ဆောင်လေး တွေ ကို ကြည့်ကြပါဦး ”
ပြောပြောဆိုဆို ဖြင့် ဖြိုးသည် သူ လွယ်လာသော စလင်းဘတ်အိတ်ကြီးကို ဖွင့်ပြီး မြေကြီးပေါ် သွန်ချလိုက်သည် ။
( စကားချပ် ။ ဖြိုး လွယ်လာသော စလင်းဘတ် အိတ်ကြီးမှာ ယိုးဒယားမှ ဝယ်လာသော အယ်လ်ဗီ အမျိုးအစား ဖြစ်ကြောင်း သိရသည် )
ဘီလူးတို ့သုံးယောက်လည်း မျက်လုံးပြူးသွားကြသည် ။
“ ဟာ..ပလေးဘွိုင်း စာအုပ်တွေ ပါလား ၊ ဟောဗျာ…ဆာဒူးကြီး တို ့ကာဗိုက်တာ တို ့ဆေးကဒ်တွေ လဲ ပါတယ်ဟ ”
“ ဟိုမှာ…အခွေတွေ ဗျို ့၊ ဆင်းရဲသား ဆင်းရဲသူ ပုံလေးတွေ နဲ ့…ဟီဟိ ”
“ ဟိုမှာ ကျမ်းစာအုပ်လိုလိုတွေ ဗျ ၊ အဖုံးက အပြာရောင်တွေ နဲ့”
မောင်ပေ့စကားအဆုံးတွင် သုံးယောက်သား ကျမ်းစာအုပ်လို စာအုပ်အထူကြီးတွေ ပေါ် မျက်စေ့ကျကုန်သည် ။
“ ညှင်းညှင်းညှင်း..သိပ်အံ့ဩသွားကြလား ၊ ကျွန်မ က ရွာမှာ မရှိပေမယ့် ၊ ရွာရဲ ့သတင်းကိုတော့ မျက်ခြေ မပျက်ပါဘူး ၊ ဒီစာအုပ်တွေ က ရှင်တို ့ရွာမှာ အခု ဖြစ်နေတဲ့ အပြာ အကြောင်း ကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားတဲ့ဟာတွေ ပဲ ၊ နောက်ပြီး…ရှင်တို ့သုံးယောက်သာ ကျွန်မကို ပေးဝင်ခွင့် ပြုမယ်ဆိုရင် ၊ ဟောဒီက ကျွန်မ ရဲ ့ယိုးဒယားက မခိုးတရားပြန်လာတဲ့ အလှအပ လေးတွေ ကို လည်း ရှင်တို ့ကို အသေးစိတ် လေ့လာခွင့် ပြုဦးမှာ ….သိလား ”
ညုတုတု နှင့် ပျစ်ချွဲချွဲ လုပ်ပြနေသော ဖြိုးကို ကြည့်ကာ ဘီလူးတို ့သုံးယောက် လွန်စွာ စိတ်ပျက်သွားကြသည် ။
“ ဟိတ်..ငါတို ့ကိုများ ဘာမှတ်နေလဲ ၊ ရွာထဲမှာ အခု တလော အရမ်းရှုပ်နေလို ့မှ ၊ သူကြီးက သေချာ ကင်းစောင့်ခိုင်းထားတာ ၊ ဒီလောက် လက်ခံ စကားပြောပေးနေတာကို က နင့်အတွက် ကံကောင်းလွန်းလှပြီ ၊ ဒီတော့ အခုချက်ချင်း နင့်ဟာတွေ နင်ပြန်သိမ်းပြီး လစ်တော့ ၊ နင်လာရှုပ်တာနဲ ့ငါတို ့အသောက်ပျက်တယ် ၊ ကြာရင် အသက်ပျောက်လိမ့်မယ် ၊ ဒီတော့ လာရာလမ်း ကို သာ မြန်မြန် ပြန်လစ်ပေတော့ ၊ မဟုတ်ရင် ပေါက်ဖော် ရဲ ့ပုလင်းပျံ ၊ လေးခွ စာ လာပြီသာ မှတ်ပေတော့ ”
“ ကြားတယ်နော် အခြောက်မ ၊ ကိုဘီလူး ပြောသလို ပဲ ၊ နင်အခု မလစ်လို ့ကတော့ ဒီမှာ ပေါက်ဖော် လက်ရာကို ကြည့်စမ်း ”
ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့် လောက်စာလုံး တစ်လုံးကို ဖြိုး ၏ နံဘေးနားကို လျှပ်ပစ်လိုက်သည် ။ ဖြိုးလည်း အလန် ့တကြား ထခုန်လိုက်သည် ။
“ အောင်မလေး..တစ်ကယ်ကြီး ရက်စက်ကြတော့မယ်ပေါ့လေ..အဟစ်အဟစ် ၊ ကောင်းပါပြီ..အသည်းနှလုံးမရှိတဲ့ လူကြီးတွေ ၊ သွားမယ် ၊ ဟိုဘက်ရွာမှာပဲ သွားနေတော့မယ် ၊ နောက်မှ သာ ၊ ရှင်တို ့တွေ…ဖြိုးလေး ကို မကြင်နာလိုက်ရတာ ရင်နာလှပါတယ် ဆိုပြီး နောင်တမရကြစေနဲ ့…အဟစ်ဟစ် ”
“ သွားသွား..မြန်မြန်သာကြွပေတော့ ၊ မယ်မင်းကြီးမ ရေ ၊ ဝေးလေ ကောင်းလေ ပဲ ”
ဖြိုး လည်း သူ ့ပစ္စည်းများကို သူ ့စလင်းဘက် အိတ်ကြီးထဲ ပြန်ကောက်ထည့်ကာ ၊ ဆတ်ကော့လတ်ကော့ဖြင့် တစ်ကိုယ်လုံး တုန်ခါယမ်းလှုပ်ပြီး ပြန်ထွက်သွားလေတော့လေသည် ။
ဘီလူး၊ပေါက်ဖော် နှင့် မောင်ပေ တို ့လည်း သက်ပြင်းကိုယ်စီ ချ လိုက်ကြပြီး ၊ အသက်မပျောက် အသောက်မပျက်ရလေအောင် ပုလင်းလက်ကျန်လေး များ ကို မော့လိုက်ကြကာ ၊ စောင့်ရင်း သောက်ရင်း ၊ ကင်းစောင့်တာဝန်ကြီးကို ဆက်လက် ထမ်းဆောင်ကြတော့သည် ဟူသတည်း ။
—————————— ပြီးပါပြီ ——————————
——————————— အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည် ———————————
နောက်မို့များတော့ ဒီအခြောက်မ ငါတစ်ယောက်ထဲနဲ့တင်
အသက်ပျောက်တယ် ..ဟင်းဟင်း… ;)
ယောင်ခြောက်ဆယ်မ .. အဲ .. အခြောက် မကြီးက လာဖျာရောင်းသေးတယ်ပေါ့ .. ဟီးဟီး
ကိုပေါက်ဖော်ရဲ့ လောက်စလုံး အစွမ်းထုတ်ပြလိုက်မှ …. ကြောက်အား လန့်အားဖြစ်သွားတော့တယ်
ဒါနဲ့ .. ချစ်တီးအိမ်မှာ ဝက်မွေးတယ်ဆိုတော့ … ချစ်တီးက အင်ကြီးလား ကိုပေ … ။
ကိုပေ တရားခံလဲ မပေါ်ဘူးနော် … သူခိုးက ဘယ်သူတုန်း ???
ဒါပေမယ့် ရွာထဲမှာ ကိုဘီလူး၊မောင်ပေ နဲ့ ပေါက်ဖော် တို့ရှိတာ
တော်တော် အားကိုးရတာပဲနော် ….
ဟုတ်တယ်လေ မောင်ပေရေ တရားခံလည်း မပေါ်ပါလား …
ကြည့်ရတာ ကင်းစောင့်ရင်း အကုန်အိပ်မောကျကုန်လို့ … သူတို့ ကိုယ်က အဝတ်တွေပါ ..ဟိုက အကုန် မသွားတယ်ထင်တယ်..
တရားခံက… က…( . . .)
ပရိတ်သတ်ကြီး..စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ တရားခံကို..အပူတပြင်း လိုက်လံစုံစမ်းဆဲဖြစ်ပါတယ်..
အနှီ..တရားခံကိုမိပါက ပြင်းပြင်းထန်ထန် အပစ်ပေးပြီး ကုန်းကုန်း ဘဝပြောင်းကာ တာမွေကြက်ဘဲဈေး
ပို ့ပစ်မည်ဟု.. ဒေသစံတော်ချိန် ၁၉နာရီ ဆယ့်ရှစ်မိနစ်တွင်ထုတ်လွှင့်သွားသော …မှောင်တောင်ကြောင်တောင် သတင်းဋ္ဌာန မှတစ်ဆင့်..စီအိုင်အေ.သဂျီးမှ ထုတ်လွှင်ပြောကြားသွားပါတယ်
အထူးရဲ့ကွန်မန်ဒို…သင်တန်းဆင်..လီယောင်ပေါက်..နှင့်….မီးသတ်သင်တန်းဆင်း..မေကြောင်ပေတို ့ကို .
တရားခံကို လျင်မြန်စွာ ဖမ်းဆီးနိုင်ရေးအတွက်….တာဝန်ပေးအပ်ထားပါတယ်ဟု.. ပြောရေးဆိုခွင့်မရှိသူ..
တစ်ဦးမှ..ဂေဇတ်..အတင်းဋ္ဌာနသို ့….စာတိုက်မှတစ်ဆင့်..အတင်းပေးပို ့သွားခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ ၃ယောက် ညလုံးပေါက်..
ဖြိုးက ထွက်သွား စိတ်ချထား
ဖြိုးက အထွက် သဝှက်ကပ်
အခြောက်မက အပေါက်ဝကနေ ကိုပေ့ကို မြူဆွယ်သေးတယ်ဆို
အင်းလေးခွ တွေ.မှ အခြောက်မ ကောက်ကောက်ပါအောင်ပြေးတာကိုးဗျ
ကိုပေတို. ပုလင်းတင်သောက်ရအောင် စင်ဆောက်ပေးတာ ကျနော်ဗျ
ကိုပေကသာ နှင်ထုတ်လိုက်လို. အခြောက်မ အပေါက်ဝက လှည်.ပြန်တယ်ပြောတယ်
မနက်မိုးလင်း သူကြီးက ကျနော်.ခေါ်ပြီး ရွှေဘိုသား ကင်းတဲ.ကို သွားကြည်.စမ်းဆိုလို့ လာကြည်.မိတယ်
ကင်းတဲပြိုနေတယ်ဗျ အခြောက်မ လက်ချက်လား ပူးပေါင်း ဖြိုခွဲလိုက်တာများလား ကိုပေ
ဝေလေလေ မလုပ်နဲ့ အမှန်တိုင်းဖြေ
ကိုရွှေဘိုသားက အခြောက်မလို့ပြောနေ … ပုပုနဲ့တော့ တွေ့တော့မှာပဲ … ပုပုက အခြောက်မလို့ပြောရင် ကြိုက်တာ မဟုတ်ဘူး …..
ဟုတ်တယ် မျာက ဟုတ်ပါဘူးယောင်လို့
ဒို့က ကျားတွေ ကျားမို့လို့
ကိုဘီလူး ရယ် ၊ ပေါက်ဖော် ရယ် ၊ မောင်ပေ ရယ် သုံးယောက် သား ကင်းစောင့်နေတုန်း၊ ကျွန်မ ပါ ဖြိုး ရယ်ပါ ဆိုတာရောက်လာ၊ မည်သို့မည်ပုံ လုပ်လိုက်သည်မသိ၊ အောင်မလေး..တစ်ကယ်ကြီး ရက်စက်ကြတော့မယ်ပေါ့လေ..အဟစ်အဟစ် ၊ ကောင်းပါပြီ..အသည်းနှလုံးမရှိတဲ့ လူကြီးတွေ ၊ လို့ အော်သံထွက်လာ။
ဘီလူးကြီးက ဒီအခြောက်မ ငါတစ်ယောက်ထဲနဲ့တင်
အသက်ပျောက်တယ် ..ဟင်းဟင်း… ဆိုတော့ …..
ကိုပေ ရေးပြတာ မကြည့်ပဲ တွေးသာ ကြည့်လိုက်ပါတော့။
လက်တမ်း စာတိုတွေ အရေးကောင်တဲ ့..သူရေ..။
ကိုယ် လည်း အဲဒီလို ရေးတတ်ချင်လိုက်တာ..ဗျာ…
မောင်ပေ ပေါက်ဖော် ဘီလူးနော်
ပုပု စိတ်ကောက်သွားပြီ။ သူ့ဟာသူ ကိလေသာထတာကို ဒါပဲလာပြောနေကြတယ်။ နင်တို့ကြတော့ရော မထလို့လားတဲ့၊ ပိုးမျိုးရှစ်ကုဋေ ရွပိုးထိုးနေတဲ့ဟာတွေတဲ့၊ အီးမေးလ်ကနေ တဆင့်ပြောခိုင်းလို့…။
မစားဘူး မမြည်းဘူဘဲနဲ့ ဇွတ်ဘဲ
စမ်းကြည့်ဦး ပြီးမှ လျှာလည်သွားမယ်
ဒါနဲ့ ရဲဘော်ကြီးရ . . .ကိုချစ်တီးရဲ့ မိန်းမသုံးယောက်က ကုလားမတွေဆို ဝက်သားဟင်းလည်း တီးတာပဲလားဗျ .
ချစ်တီး ဖြစ်ရတော့သပ ရဲဘော်ရာ
တီးတာမှ ၊ သတို ့အိမ်က
ခွေးတောင် ငိုရှာတယ် ဆိုပဲ
သူ ့အတွက် မကျန်လို ့တဲ့
မိန်းမတယောက်မကယူ.. ကလေး၁ဝယောက်မကမွေးခဲ့တော့.. အခုကျေးရွာတွေက..မြန်မာတွေနဲ့အမျိုးအကြီးကြီး..တော်နေပါပြီ..။
မြန်မာတွေ.. အမဲသားမစားတာနဲ့.. ယောဂကျင့်တာတွေက..အဲဒီကနေ..အမြစ်တွယ်လာတယ်..တွက်မိပါတယ်..။
လျောက်ပြောနေ…။ နွားတွေက မြန်မာ့ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးရေးမှာ သုံးတာဖြစ်လို့၊ အခုလည်း နွားနဲ့ဖက်ပြီး လယ်ထွန်နေရဆဲ၊ ပြီးတော့ နွားတွေက လူနဲ့နီးတယ်၊ သူတို့ရဲ့ ခံစားမှုကို လူတွေသိအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ ထူးခြားချက်ရှိတယ်။ သူတို့ကို သားသတ်ရုံပို့ခါနီး ရုန်းကန်တာတို့၊ အသတ်ခံရခါနီး ငိုတာတို့ဆိုတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ အတော်များများ ရှိတယ်။ အဲဒါ မြန်မာတွေတင်မက မွတ်စလင်တွေပါ ပြောတာနော်၊ သနားဖို့ကောင်း ဆိုတဲ့အကြောင်း။ အင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာလည်း လယ်တီဆရာတော်ဦးဆောင်ပြီး အမဲသားမစားဖို့ တရာတွေဟော၊ နွားဋီကာရေးခဲ့တာ မြန်မာလူထုအတွင်းမှာ အကြီးအကျယ် ထောက်ခံမှုရခဲ့တယ်။ အဲဒီမတိုင်ခင်ကလည်း သူ့အရပ်နဲ့သူ လယ်ထွန်ဖက်နွားကို သားသတ်မစားဖို့ သနားကြင်နာတတ်တဲ့ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ ပြောဆိုစည်းရုံးသူများ ရှိမှာဧကန်ပါပဲ။ သဂျီးပြောသလို ချစ်တီးတွေကြောင့်လို့ မဟုတ်ကြောင်း ပြောတာပါ။ ချစ်တီးဆိုတာ ဟိန္ဒူဖြစ်လို့ အသားစားတဲ့ ဇာတ်နိမ့်ဖြစ်တောင် နွားရော၊ ဝက်ပါမစားတာ များပါလိမ့်မယ်။
ဖြိုးဖြိုး ဒီဆိုဒ်ထည်းမှာ လိင်တူချစ်သူတွေအကြောင်းရေးတော့
အားလုံးကန့်ကွက်လို့ သူက ငြိမ်းချမ်းစွာထွက်ခွာသွားတယ်
ပြင်းပြင်းထန်ထန် တွန်းတွန်းကန်ကန် ပေါက်ပေါက်ကွဲကွဲ ကန့်ကွက်ပါတယ်
ဩစတြေးလျပတ်စ်ပို့အတွက် လိင်အမျိုးအစားသုံးမျိုး သတ်မှတ်လက်ခံမည်
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအပြင် x ဟု သီးခြားသတ်မှတ်ချက်တစ်ခု ပြုလုပ်ရန်ပါ ဩစတြေးလျက အတည်ပြုပေးလိုက်
ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ပတ်စ်ပို့အတွက် လိင်ခွဲခြား သတ်မှတ်မှုကို ယခုအခါ သုံးမျိုးသုံးစား လက်ခံသွားမည်ဟု သိရသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအပြင် x ဟု သီးခြားသတ်မှတ်ချက်တစ်ခု ပြုလုပ်ရန်ပါ ဩစတြေးလျက အတည်ပြုပေးလိုက်သည်။ x ဟူသော သတ်မှတ်ချက်သည် ကျား၊ မခွဲခြားရန် မပီပြင်သည့် ပုံမှန်မဟုတ်သော လိင်အခြေအနေမျိုးကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဇီဝဗေဒ ဖြစ်စဉ်အရ ယောက်ျား၊ မိန်းမ ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် ခက်ခဲသော သာမန်မဟုတ်သည့် အခြေအနေမျိုးကိုပါ ပတ်စ်ပို့အတွက် သတ်သတ်မှတ်မှတ် ခွဲခြားပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
သဘာဝအတိုင်း မဟုတ်ဘဲ လိင်ခွဲစိတ် ပြုပြင်မှု ခံယူထားသူများသည် ယောက်ျား၊ မိန်းမ နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်ခွင့် ရှိသော်လည်း x အခြေအနေနှင့်မူ အကျုံးဝင်မည် မဟုတ်ဟု သိရသည်။ ယခင်က ဩစတြေးလျ ပတ်စ်ပို့အတွက် လိင်ခွဲစိတ်မှု ခံယူထားပြီးသူများပင်လျင် မိမိတို့၏ ယောက်ျား၊ မိန်းမ သတ်မှတ်ချက်ကို ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့် မရှိပေ။ ဩစတြေးလျသည် ယခုအခါ ကမာ္ဘပေါ်တွင် x သတ်မှတ်ချက်ကို ပထမဆုံး ပတ်စ်ပို့ ထုတ်ပေးသည့် နိုင်ငံလည်း ဖြစ်လာသည်။
ဩစတြေးလျ ဆီနေတာ လူးဝစ်ပရတ်၏ ချစ်သူသည် မိန်းကလေး တစ်ဦးအနေနှင့် မွေးဖွားလာသော်လည်း ယခုအခါ အမျိုးသား တစ်ဦးအဖြစ် ရှင်သန်ရပ်တည်နေသည်။ ပရတ်က ယခုသတ်မှတ်ချက် ပြောင်းလဲခြင်းသည် လိင်ခွဲစိတ်မှု ခံယူပြီးနောက် ပြည်ပသို့ သွားရောက်ရာတွင် ပတ်စ်ပို့ပြဿနာ တက်နေသူများအတွက် များစွာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ သူမက x သတ်မှတ်ချက်သည် အလွန်အရေးပါကြောင်းနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံ မပီပြင်သူများသည် တန်းတူအခွင့်အရေး သတ်မှတ်ချက်တစ်ခု ရှိလာခြင်းဟု ယူဆနိုင်ကြောင်း ပြောဆိုသွားသည်။ ဩစတြေးလျ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကီဗင်ရုဒ်က ဩစတြေးလျ၏ လိင်စံနှုန်း ခွဲခြားသတ်မှတ်မှု အသစ်သည် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသော လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ထင်ဟပ် အထောက်အကူပြုစေမည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုသွားသည်။
“လိင်တူချင်းချစ်တာ တကယ်အပြစ်လား” “လိင်တူချင်းချစ်တဲ့ သူတွေကို ဘုရားသခင်တကယ်မုန်းလား”
Colours Rainbow – Article .သက်တံ့အယ်ဒီတာအဖွဲ့ စက်တင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၁
လွန်ခဲ့တဲ့ ဩဂုတ်လတုန်းက ကျမရဲ့အသင်းတော်မှာ “လောင်မြိုက်သော မေးခွန်းများလို့” ဆိုတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းအစီအစဉ်လေးတခုကို ပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဓိက တော့ အသင်းသူအသင်းသားတွေဆီကနေ ရုတ်တရက်မျော်လင့်မထားတဲ့ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အလွန်အင်မတန်မှ ခက်ခဲနက်နဲ့ ရှုပ်ထွေတဲ့ မေးခွန်းတွေ၊ အသင်းတော်မှာ ဘယ်သူမှ သိပ်မဆွေးနွေးချင်တဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကို လက်ခံဆွေးနွေးတဲ့အစီအစဉ်လေးပါ။ အဲဒီနေ့က မေးခွန်းတွေ သိပ်များလာတော့ ကျမမှာလည်း ဘာမှ ကြိုတင်ပြင်ထားတာမျိုး မရှိတဲ့အခါကျတော့ သူတို့ကို ကတိတခုပေးလိုက်မိပါတယ်။
အဲဒီကတိကတော့ တခြားမဟုတ်ပါဘူး ဒီလိုဆို တနှစ်တာကာလပတ်လုံး အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာ ဒီအစီအစဉ်လေးကို အကောင်အထည်ဖော်သွားကြရအောင်ပေါ့။ မေးလာသမျှမေးခွန်းတွေကို အကုန်ကောက်မယ် အဲဒီထဲကမှ လူမေးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ မေးခွန်းသုံးခုကိုရွေးမယ်။ ပြီးရင်အဲဒါကို ကျမကဖြေကြားပေးမယ်လို့ ကတိပြုလိုက်ပါတယ်။ ဆိုတော့ အဲဒီနေ့မှာပဲ သိပ်မကြာလိုက်ပါဘူး မေးခွန်းတွေ အကုန်စုလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ လူမေးအများဆုံးမေးခွန်းသုံးခုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမေးခွန်းတွေကတော့
၁) လိင်တူချင်းချစ်တာ အပြစ်လား (သို့) လိင်တူချင်းစုံမက်တာ တကယ်အပြစ်ရှိပါသလား
၂) ငရဲဆိုတာ တကယ်ရှိပါသလား
၃) တပါးသူရဲ့အပြစ်ကို ဘယ်လိုခွင့်လွတ်ပေးရမလဲ
အဲဒီမေးခွန်းသုံးခုထဲကမှ လိင်တူချင်းချစ်တာ အပြစ်လားဆိုတဲ့ မေးခွန်းက နံပါတ် (၁) ချိတ်နေပါတယ်။ ဆိုတော့ ကျမက ဒီမေးခွန်းကို လာမယ့်အပတ်မှာ ဖြေဖို့အတွက်စတင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။
ဒီမေးခွန်းကို ဖြေနိုင်ဖို့အတွက် ကျမ တပတ်လုံး လိင်တူချစ်ခြင်းနဲ့ ခရစ်ယာန်အသင်းတော် စတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်စာပေတွေကို ရနိုင်သလောက် လိုက်လံဖတ်ရှုရပါတော့တယ်။ ခရစ်ယာန် ဂိုဏ်းဂဏပေါင်းစုံမှာရှိတဲ့ စကော်လာတွေရဲ့စာတွေကို ကျမအပတ်တကုတ်လေ့လာဖတ်ရှုခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ယူနိုက်တက် အသင်းတော်ကထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ “အပြစ်သားဘဝနှင့် နေထိုင်အသက်ရှင်ခြင်း”၊ ပြီးတော့ ဧဝံဂေလိအသင်းတော်ကဘာသာရေး ဆရာတွေသားခဲ့တဲ့ “လိင်တူချင်းချစ်တဲ့သူတွေဟာ ကျနော်၊ကျမတို့ရဲ့ အိမ်နီးချင်း ဆိုတဲ့စာရင်းမှာ အမှန်တကယ်ပါပါရဲ့လား”အစရှိတဲ့စာအုပ်တွေလည်းအပါအဝင် လက်လှမ်းမှီသမျှ အကုန်ကိုဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆိုတော့ ကျမတပတ်လုံး စာအုပ်ပုံတွေထဲမှာ အချိန်ဖြုန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ လာမယ့်အပတ်မှာဆွေးနွေးမယ့် “လိင်တူချင်းချစ်တာအပြစ်လား”ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ဖြေကြားဖို့အတွက် ကျမမှာအဆင်သင့်ဆိုသလိုမျိုဖြစ်လို့နေခဲ့ပါပြီ။
ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိဘူး တနင်္ဂနွေနေ့မရောက်ခင် ကြာသာပတေးနေ့မှာ မမျော်လင့်ပဲ ကျမဖြေမယ့်ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျမနည်းနည်းလေးတွေဝေနေသလို ခံစားလာခဲ့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ကျမကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပိုသေချာအောင်ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိယ်ကို မေးခွန်းတွေအထပ်ထပ် ပြန်မေးနေခဲ့ပါတယ်။
“ဒီမေးခွန်းကို ဖြေရတဲ့ ကျမရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကဘာလဲ? ပေါ့
ခရစ်ယာန်သင်းအုပ်ဆရာမ တယောက်အနေနဲ့ ကျမတို့အသင်းသူအသင်းသားတွေကြားထဲမှာ ဒီလိင်တူချင်းချစ်တဲ့ကိစ္စက အလွန်အင်မတန်ကိုမှ ထိလွယ်ရှလွယ် ဆွေးနွေးရခက်ခဲတဲ့ အကြောင်းအရာတခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကျမကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ ဒီလိင်တူချင်းချစ်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် အထူးသဖြင့်ကျမတို့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေမှာ အမြင်းအမျိုးမျိုး၊ ခံစားချက်အမျိုးမျိုးတွေနဲ့ ရှုပ်ထွေးပွေလီလှတဲ့ အကြောင်းအရာတခုလို ခံစားရှုမြင်သပ်ကြတာာ လူတိုင်းသိပါတယ်။ တချို့ဆို ခေါင်းထဲတောင် အရောက်မခံ နိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးပါ။
ဒါကြောင့် ဒီလိင်တူချင်းချစ်ခင်စုံမက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျမတို့အသင်းတော်တွေမှာ ဒီနေ့မေးသင့်မေထိုက်တဲ့၊ ဆွေးနွေးဖို့သင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတခုဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုတာကို ကျမသိနားလည်လာခဲ့ပါတယ်။ သီအိုရီအတွေးအခေါ် တခုသက်သက်တင်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ တကယ်လက်တွေ့ဘဝနဲ့ကိုဆက်စပ်နေတဲ့ ကိစ္စအကြောင်းအရာဆိုတာကို ကျမလုံးဝလက်ခံထားလိုက်ပါတယ်။
အခု ကျမဒေသနာတော်ကို ဟောကြားတော့ မယ့်အချိန်မှပဲ ဟောဒီဘုရားကျောင်းထဲမှာ ထိုင်နေတဲ့သူတွေထဲမှာတင်
“ငါတို့လင်မယား ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး လိင်တူစုံမက်တဲ့ ဂေး ကလေးကိုမှ မွေးမိလိုက်တာလဲ၊ ငါတို့လင်မယား ဘာအပြစ်များလုပ်ခဲ့မိလို့လဲ” ဆိုပြီး ဝမ်းနည်းပက်လက်နဲ့ ယူကျူံးမရ စဉ်းစားနေတဲ့ စုံတွဲမိဘတွေတပုံရှိနေနိုင်သလို
မိမိသိပ်ချစ်ရတဲ့မိသားစု၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အလုပ်အကိုင် ဂုဏ်သိက္ခာတွေ ထိုခိုက် နစ်နာသွားမှာကို စိုးရိမ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိင်တူချစ်သူပါလို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ဖော်မပြောဆိုဝံ့ပဲ အသင်းတော်ရဲ့ ဝေယျာဝိစ္စအဝဝကို ရိုးရိုးသားသား ကြိုးကြိုးစားနဲ့ ဆက်ကပ်နေတဲ့ လိင်တူချစ်သူတွေလည်း ဒီဘုရားကျောင်းထဲမှာ ဒုနဲ့ဒေး ရှိနေကြပါလိမ့်မယ်။
ကျမတို့အသင်းတော်အထဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂေး ဖြစ်မှန်သိနေလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်နေတဲ့ လူငယ်တွေလည်း တပုံကြီးပါ ဒီအကြောင်းကို ကျမတယောက်ထဲသိနေတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ကျန်တဲ့လူတွေလည်း အများကြီးသိကြမှာပါ ဒါပေမယ့် အားလုံး ရေငုံနှုပ်ပိတ်နေကြပါတယ်။ အဲဒါဘာကြောင့်လဲ။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျမတို့ ခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဝေခွဲမရတဲ့အတွေးတွေ၊ အဖြေမရှိတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့ အင်မတန်မှကို ပွေလီရှုပ်ထွေး ပြီး စဉ်းစားအဖြေရှာမရနိုင်အောင် ပင်ပန်းနေကြတဲ့ အတွက်ကြောင့်လို့ပဲကျမထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့တော့ ဒီကိစ္စကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးကြဖို့ အချိန်တန်ပြီးလို့ ကျမဆိုပါရစေ။
ဒီမနက်အတွက် ကျမဝေမျှချင်တဲ့ ဒေသနာတော်ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ရည်မှန်းချက်ကတော့ အသင်းသူအသင်းသားတွေအားလုံးကို လာမယ့်အပတ်စဉ်တွေတိုင်းမှာ ကိုယ့်ရဲ့မြင်တဲ့အမြင်နဲ့ ခံစားချက်တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဆွေးနွေးခိုင်းကြဖို့ပါပဲ။ စကားရည်လုပွဲတွေမှာလုပ်သလိုမျိုး ခေါင်းစီးတခုပေးပြီး ဘောင်သတ်မှတ် ဆွေးနွေးခိုင်းတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ပါဘူး ကိုယ်ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံပေါ်မှာမူတည်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးခိုင်းစေချင်တာပါ။ ကိုယ့်အမြင်ကို ကိုယ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတင်တင်ပြကြပါ၊ ကိုယ့်နှလုံးသားထဲကလာတဲ့ စကားသံတွေနဲ့ အတူ ကိုယ့်ဘဝ အတွေ့အကြုံထဲကနေ ရရှိခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာတွေကိုပဲ ပြောဆိုဆွေးနွေးစေချင်ပါတယ်။
ဆိုတော့ လောလောဆယ် ကျမဖတ်မှတ်လေ့လာခဲ့သမျှ စာအုပ်တွေကို ဘေးဖယ်ထားလိုက်ဦးစို့လား။ ကျမလည်း ကျမအတွေ့အကြုံဖြတ်သန်းမှုကနေ သိရှိနားလည်းလာခဲ့ရတဲ့ လိင်တူချင်းချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို စတင်ဆွေးပါရစေလားရှင်။ ဒီလိုပဲ နောက်လတွေမှာလဲ အသင်းသားတွေထဲကနေ ကျမလိုပဲ ကိုယ့်ဘဝမှာ တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ လိင်တူချင်းချစ်သူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို တယောက်တလှည့်စီ သက်သေခံသွားကြတာပေါ့၊
ကျမက ရှေးရိုးစွဲခရစ်ယာန်မိသားစုကနေ မွေးဖွားကြီးပြင်လာခဲ့ရတဲ့သူပါ။ ဒါပေမယ့် ကျမငယ်ငယ်ကတည်းက တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဘုရာင်းကျောင်းကနေ အမြဲသင်ယူနားလည်ခဲ့တာကတော့ ဘုရားသခင်ရဲ့ ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာ လူသားအားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီအတွေးအခေါ်ဟာ ကျမကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ အသင်းတော်ရဲ့ ဓမ္မ အတွေးအခေါ်ပါ။ အဲဒါထက်ပိုလို့အရေးကြီးတဲ့ အချက်နောက်နှစ်ချက်ကိုလည်း ကျမ ငယ်ကတည်းကနေ သင်ယူလေ့လာခဲ့ရပါတယ် အဲဒါတွေကတော့ ဘုရားသခင်ကိုချစ်ဖို့ရန်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်နီးနားချင်း (သို့) ကိုယ်နဲ့စပ်ဆိုင်သောသူကို ကိုယ်နဲအမျှချစ်ဖို့ရန် ဆိုတဲ့အချက်တွေပါပဲ။
ကျမပဲဂရုမစိုက်မိတာလား ဘယ်လိုလဲတော့ ကျမလည်း မမှတ်မိတော့ဘူး ကျမကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လိင်တူချင်းချစ်တဲ့သူ ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ကျမဘယ်တော့မှ မကြားဖူးခဲ့ပါဘူး။ ဆိုတော့ကား ကျမ အထက်တန်းကျောင်း မရောက်ခင်ကျမှပဲ ကျမအဲဒီစကားလုံးကိုစကြားခဲ့ဖူးတယ်။ ထူးဆန်းတာက ကျမအဲဒီစကားလုံးကို ကြားကြားချင်း ကျမအတွက် ဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်၊ ပြောရရင်ကျမအတွက် လိင်တူချင်းချစ်တဲ့သူဆိုတဲ့ စကားလုံးက တခြားသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ နှိုင်းလိုက်ရင် ဘာပြသနာမှမရှိဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကျမကို ကျမစပြီးသတိထားမိလိုက်တာက ကျမ ငယ်ငယ်ကတည်းက လိင်တူချင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာ ရွံစရာ၊ ရှက်စရာ၊ ထိတ်လန့်စရာဆိုပြီးတော့ ဘယ်တုန်းကမှ သင်ကြားမခံခဲ့ဖူးတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်မယ်လို့။ အသက်နည်းနည်းကြီးလာတော့မှပဲ ဪ အဲဒီလိုမျိုး လူတဖက်သားကို မုန်တီးရွံရှာအောင် သင်ပေးလိုက်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေဟာ လူ့ဘဝရဲ့အနာဂတ်ကို ဘယ်လောက်တောင် အကျိုး သက်ရောက်မှုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်လာခဲ့ရပါတယ်။
ကျမ အသက် နှစ်ဆယ်ရောက်တဲ့အထိ လိင်တူချင်းချစ်တဲ့သူဆိုတဲ့ လူသားမျိုးတယောက်ကိုမှ မမြင်ဖူးခဲ့ဖူးပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကျမရဲ့အတွေးအခေါ်ထဲမှာလည်း လိင်တူချင်းချစ်ကြတယ်ဆိုတာ လူသားနှစ်ဦးချစ်ကြတာပဲလေ၊ တပါးသူကို မထိုခိုက်ရင်၊ နာကျင်အောင်မလုပ်ဖူးဆိုရင် ပြီးသားပဲ ဘာပြသနာရှိလဲ ပျော်ပျော်ရွင်ရွင်နေကြပါစေပေါ့ ဒီလိုပဲတွေးတယ်။ အဲဒါကျမခေါင်းထဲမှာ အိုတိုမက်တစ် ရှိပြီးသား အတွေးအခေါ်ပါ။
အသက် သုံးဆယ် ဆိုတဲ့ အရွယ်ကို ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ကျမမှာ အိမ်ထောင်နဲ့ ကလေးသုံးယောက်အမေ၊ အလုပ်အကိုင်လည်းရှိ တည်ငြိမ်တဲ့ အိမ်ထောင်တခုကို ထူးထောင်ပြီးခါစအချိန်ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ အဲဒီအချိန်ှကျတော့မှပဲ ကျမရဲ့ ဘဝမှာ လိင်တူချင်းချစ်တဲ့သူဆိုတဲ့ သူကိုပထမဦးဆုံးစတွေ့ခဲ့ဖူးတာပါ။ သူ့နာမည်က ဆယ်လီလို့ခေါ်ပါတယ်။ ကျမက သူနေတဲ့ ဗင်ကူးဗားက ကျမ်းစာကျောင်းမှာ တပတ်နှစ်ရက် ဓမ္မပညာကို လာရောက်ဆည်းပူးသင်ယူနေရတာပါ။ ဆိုတော့ ကျမက အနည်းဆုံးနှစ်ညတော့ ကျောင်းဝန်းထဲမှာ အိပ်ရတယ်။ ဒါနဲ့ ကျောင်းဝန်းထဲက စတူဒီယိုခန်းမှာနေတဲ့ ဆယ်လီနဲ့ ကျမအတူတခန်းထဲပဲအိပ်ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပုံမှန်ဆိုသလို နောက်နေ့ ဗုဒ္ဒဟူးနေ့ဆိုကျမက အိမ်ပြန်ပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ သုံးနှစ်လောက်ကြာလာတဲ့အခါကျတော့ ဆယ်လီနဲ့ကျမ အရမ်းရင်နှီးတဲ့သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ကျမဘဝမှာလေ ဆယ်လီလောက် ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းတဲ့သူ တယောက်မှမမြင်ဖူးခဲ့ပါဘူး။ သူမက ဝိညာဉ်ရေးပိုင်းမှာ အရမ်းအားကောင်းတဲ့သူ ဇွဲရှိတဲ့သူ ယုံကြည်ခြင်းကြီးတဲ့သူတယောက်ပါ။ မနက်ငါးနာရီဆိုတာနဲ့ထပြီ၊ စက်ဘီးစီးရင်းနဲ့ ဘုရားရှိခိုဖို့အတွက် သူထွက်သွားပြီ၊ ပြီးရင် သူ့မှာ အဝတ်အစား ငါးစုံနဲ့ ဖိနပ်နှစ်စုံပဲထားတယ်တဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆို ဘုရားရဲ့အလိုတော်အရ သူ့အတွက် ငါးစုံဆိုတာ လုံလောက်ပြီပေါ့။ ပြီးရင် တပတ်လုံးလိုလို စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းတွေကို လိုက်လုပ်တယ်၊ ဆုတောင်းစာအုပ်တွေ ဆိုတာအမြဲသူနဲ့အတူပဲ။ သူ့ကိုကြည့်ပြီး ကျမကို ကျမတောင်ရှက်မိတာ အကြိမ်ကြိမ်ပဲ။ ကျမပြောချင်တာက ဆယ်လီရဲ့ အဓိက ထူးခြားချက်က သူ ဘုရားသခင်ကိုချစ်တယ်၊ ဘဝကို ပျော်ပျော်ရွင်ရွင် ရိုးရိုးသားသားနဲ့ဖြတ်သန်းတယ်၊ သူမရဲ့ဘဝကို သူမချစ်မြတ်နိုးနိုင်နေသလို တခြားလူတွေကိုလည်း သူမက ချစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။
ကျမတို့နှစ်ယောက်က တယောက်တကုတင်နဲ့ ဟိုဖက်ဒီဖက် ခြေရင်းချင်ဆက်ပြီး အိပ်ကြတာပါ။ ဒီလိုနဲ့ တညတော့ ဆယ်လီက ဆုမကောင်းချင်ဘူးလားလို့ မေးလာပါတယ်။ ကျမဘဝမှာ ကိုယ့်ရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့ တခြားလူတယောက်ရှေ့မှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆုတောင်းတာမျိုးတခါမှမလုပ်ခဲ့ဖူးဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းရေးတွေကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဖွင့်ချတောင်းခံရတဲ့အရာကိုး၊ ဆိုတော့ အစပိုင်းမှာ ရှက်သလိုလိုခံစားခဲ့ရပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးတော့ နေသားကြသွားပါတယ်။ ဒီလို အတူတကွ ဆုတောင်ကြရင်းနဲ့မှ နောက်တော့ ဆယ်လီက သူမဟာ လိင်တူချင်းချစ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပါဆိုပြီး ဖွင့်ထုတ်ပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။
ကျမအတွက်တော့ ဆယ်လီတယောက် သူ့ရဲ့လိင်စိတ်ခံယူမှု အစစ်အမှန်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိလိုက်တာဟာ သူမရဲ့ ရွေးချယ်မှု၊ သူမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုလို့မထင်ပါဘူ။ အခုဒီမှာရှိနေတဲ့အသင်းသူ အသင်းသားတွေကကော ကိုယ့်ရဲ့လိင်စိတ်ခံယူမှုကို ကိုယ့်ဟာကို ရွေးချယ်လို့ရခဲ့တဲ့အရာလို့ထင်လို့လား၊ ဒါဟာ ဘုရားကပေးလိုက်တဲ့ ဆုလဒ်မဟုတ်ဘူးလား စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အဓိက ကတော့ ဆယ်လီက လူသားတယောက်အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ ဘဝအမှန်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိလိုက်တာမဟုတ်နိုင်ဖူးလား ဟုတ်တယ်ဟုတ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ တစတစနဲ့ ဆယ်လီတယောက်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ နာကျင်ဖွယ် အဖြစ်အပျက်တွေကို ကျမကိုယ်တိုင်ပဲ နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ တွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအတွေ့အကြုံကတော့ ဆယ်လီတယောက် ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ သူ့ရဲ့အဖြစ်မှန်ကို ဝန်ခံထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီနောက်မှာတော့ မိသားစု ပြီးတော့ သာသနာရေးအဖွဲ့ ပြီးတော့ အသင်းသူအသင်းသားတွေနဲ့ ဘုရားကျောင်းရှေ့မှာ စသဖြင့် သူမရဲ့လိင်စိတ်ခံယူမှုကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ဝန်ခံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကျမကတော့ ခုနကပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်းပဲ သူ့ရဲ့ ဖွင့်ထွက်ပြောဆိုလာတဲ့ဖြစ်စဉ်တခုလုံးမှာ အဖော်ကောင်းတယောက်အနေနဲ့ ဝင်ရောက်ကူညီခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျမကိုယ်တိုင် အတော်ကလေးကို နာကျဉ်သွားခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ရှိခဲ့ပါတယ် အဲဒါကတော့ သူ သီလရှင်ဝတ်မယ်လို့လျောက်တင်ခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ ပရက်စ်ဘက်တီးရီးရန့် အသင်းတော်က ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် သူမကိုကန်ထုတ်ပြင်းပယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ စာသင်ခန်းတွေမှာလဲ ဒီလောက်တော်တဲ့ ကျောင်းသူ၊ ခရစ်ယာန်တွေထဲမှာဆိုရင်လည်း သူမလောက်ခရစ်ယာန်ပီသတဲ့သူ ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတဲ့သူ အဲဒီလိုအမျိုသမီးတယောက်က လိင်တူချင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဆိုတဲ့ တခုတည်းသော အကြောင်းပြချက်နဲ့ သီလရှင်ဝတ်ဖိုကိစ္စ ငြင်းပယ်ခံရတယ်ဆိုတော့ ကျမတော်တော့ကို နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဘုရားအမှုတော်ဆောင်ဖို့အတွက် ဆယ်လီတယောက်ဟာ အတင့်တော်ဆုံးပဲဆိုတာကို ကျမလုံးဝသိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့သိပ်မကြာပါဘူး ဆယ်လီတယောက် အသင်းတော်လူငယ် စီစဉ်ညွန်ကြားရေးမှူးရာထူးကနေ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ အသင်းသားတွေထဲကတယောက်က သင်းအုပ်ဆရာကြီးဆီကို ဆယ်လီဟာ ဂေးပါ ဆိုပြီး တိုင်စာပို့ခဲ့တဲ့အတွက်ပါ။ ဆယ်လီ အလုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန် ကျမ အတော်လေးကို စိတ်ဒေါ်သထွက်မိတဲ့အချိန်ပါ။ ဆယ်လီကို ဒီလိုဆုံးဖြတ်တာဟာ ခရစ်ယာန်ကောင်းတယောက်ရဲ့ လုပ်ရပ်မဟုတ်သလို၊ ဒါဟာ စာတန်မာန်နတ်ရဲ့ ခိုင်းစေမှုတခုပဲလို့ ကျမက ခံစားခဲ့ရတယ်။ အမှန်တော့ ဆယ်လီ့က လူငယ်တွေနဲ့ အတော်လေးကို ပေါင်းသင်နေထိုင်တတ်သူဖြစ်သလို၊ ဆယ်လီက လူငယ်တွေအတွက် အန္တရာယ်တခုပါလို့ ဘယ်သူအတတ်ပြောနိုင်လဲ? အဲဒီလိုပဲ ဂေး မဟုတ်တဲ့ လိင်ကွဲချင်းချစ်သူတွေကရော လူငယ်တွေအတွက် လုံခြုံမှုရှိတယ်လို့ ဘယ်သူက တတ်အပ်ပြောနိုင်မလဲ။
မကြာမှီမှာပဲ ဆယ်လီရဲ့ သောကမီးတွေက ကျမဆီကို တစတစနဲ့ ကူးစက်လောင်ကျွမ်းလို့လာခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဆယ်လီတယောက် မျက်ရည်နဲ့ပဲ အဖော်ပြုပြီး နေလာခဲ့တာ အတော်လေးကြာလာခဲ့ပါတယ်။ တမနက်မှာတော့ ကျမ အိပ်ယာထပြီး လိမ္မော်ရေငဲ့နေတုန်း ဆယ်လီတယောက် အိပ်ယာပေါ်မှာ ငိုရှိုက်နေတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပြန်တော့ ကျမသူ့ဆီသွား သူဆံပင်တွေကို ပွတ်သပ်ပေးရင်းနဲ့ ကျမသူငယ်ချင်းရဲ့ နာကျင်မှုတွေကို မျှဝေခံစားရင်း ဘာပြောလို့ပြောရမှန်းမသိအောင်ကို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျမကြိုးစားပြီး ဆယ်လီရေ ဂေးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကို ငါခံစားလို့မသိနိုင်ပေမယ့်လို့ ဂေး ဆိုတာဟာ မင်းဘဝရဲ့ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ ဘုရားသခင်က မင်းကိုဒီအတိုင်းပဲဖန်းဆင်းခဲ့တာပေါ့ ဘုရားသခင်က နင့်ကို ဂေး ဖြစ်ခိုင်းစေချင်းလို့ကို ဖန်ဆင်းခဲ့တာလေ နင်ဟာ ဘုရားရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းလက်ရာတခုပဲမဟုတ်လား အဲဒါကြောင့် နင်ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ ငါ့နင့်အပေါ်ထားတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာက ပျောက်ပျက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး လို့ပဲအားပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဆယ်လီကိုကျမနှစ်သိမ့်စကား ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ချက်ချင်းဆိုသလို လိင်တူချင်းချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန်တယောက်အနေနဲ့ ဘယ်နေရာဘယ်ရှုထောင့်ကနေကျမ ရပ်တည်နေတယ်ဆိုတာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း သိမြင်သဘောပေါက်လာခဲ့တော့တာပါပဲ။ ကျမယုံကြည့်တာကတော့ ဆယ်လီဟာ မှားယွင်းနေတဲ့သူမဟုတ်ဘူး၊ ဆယ်လီကို ငြင်းပယ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ အသင်းတော်ကသာ မှားယွင်းတဲ့ လုပ်ရပ်ကို ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒင်းတို့ကပဲ စာတန်မာန်နတ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုနောက်ကို လိုက်ပါသွားခဲ့တာပဲလို့ ကျမပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကျမကျောင်းပြီးတော့ ဝယ်လင်တန်း မက်သဒစ်အသင်းတော်မှာ ကျမ အမှုတော်ဆောင်ရပါတယ်။ မက်သဒစ်အသင်းတော်ဟာ ကျမ မလာခင် နှစ်တွေကတည်းကနေစပြီး ကွဲကွာနေခဲ့တဲ့ အသင်းသူအသင်းသားများနဲ့ ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့နွေးထွေးရေး ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်နေခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ အဲဒီအစီအစဉ်က အသင်းတော်ကနေ ဖယ်ကျဉ်ခဲ့တဲ့ လိင်တူချင်းချစ်တဲ့သူတွေကို ပြန်လည်ဖိတ်ခေါ်ပြီး မိတ်သဟာရပြုစေခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ပါ။
အဲဒီအသင်းတော်မှာ စပြီးအမှုတော်ထမ်းဆောင်တော့ ပထမဦးဆုံးကျမကြုံတွေ့လို်က်ရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုက လူငယ်လေးတယောက်က သူ့ရဲ့ လက်ကောက်ဝတ်ကို ဘိလိပ်ဓါးနဲ့ လှီးပြီး အဆုံးစီရင်မယ်ဆိုပြီးဖုန်းခေါ်လာတဲ့ အဖြစ်အပျက်ပါပဲ။ ဒါနဲ့ကျမလည်း ခေါင်းနပန်းတွေကြီးပြီးတော့ ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်းကိုမသိအောင်ဖြစ်ခဲ့တယ် အဲဒါနဲ့ ဘာဖြစ်လို့အဲဒီလိုလုပ်ရတာလဲ လို့ မေးတော့ သူက ပြောပြတယ် သူက ဂေး ပါတဲ့၊ ပြီးတော့ ခရစ်ယန်တယောက်လည်းဖြစ်နေတယ်တဲ့ နှစ်ခုစလုံးကိုသူမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးတဲ့၊ ဒါပေမယ့် တကယ့် ခရစ်ယာန်စစ်စစ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် ခုနက နှစ်ခုက ပြိုင်တူတွဲလို့မရဘူးတဲ့၊ ပြီးတော့ သူ့အဖေကလည်း သူ့ကို အရှုပ်ထုတ်၊ လူပို စသဖြင့် အမြဲတမ်းချိုးနှိမ်ပြီးပြောတယ် အဲဒါကြောင့် သူက လူသားတယောက်အနေနဲ့ ဆက်လက်အသက်မရှင်သင့်တော့ဘူး အသက်မရှင်တော့ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျမလုပ်နိုင်ခဲ့တာ တခုပဲရှိခဲ့တယ်၊ ကျမ ချက်ခြင်းဆိုသလို့ ဒူးထောက်ချလိုက်တယ် ပြီးရင် ဘုရားသခင် ခုလိုမျိုး လူငယ်လေးတယောက်ကို ဘုရားသခင်ရဲ့ မေတ္တာတော်ရဲ့ ဟိုတဖက်ကမ်းကို ရောက်အောင် တွန်းပို့ခဲ့တဲ့ အသင်းတော်တွေရဲ့ ပြစ်မှုကိုခွင့်လွတ်တော်မှုပါ လို့ပဲဆုတောင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်း ငါးနှစ်ဆိုတဲ့ ကာလအပိုင်းအခြားအတွင်းမှာ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေအမျိုးမျိုးကို တွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါ ကူးစက်ခံထားရတဲ့လူငယ်တယောက်နဲ့ လည်းဆုံဖူးတယ် သူကမေးတယ် “ကျနော်တို့လိုလူတွေကို ဘုရားသခင် မလိုးလားဘူးလား၊ ဘုရားသခင်ငြင်ပယ်ထားတဲ့ စာရင်းမှာပါလားတဲ့”။ ပြီးတော့ အသက်ထွက်ခါနီးမှာ ဘယ်တော့မှလာမတွေ့တဲ့ မိဘတွေကိူ တသသခေါ်ရင်ဆုံးပါးသွားခဲ့တဲ့ လူငယ်အများကြီးနဲ့လည်း တွေ့ကြုံခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီအတွေ့အကြုံဟာ ကျမဘဝမှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ အများကြီးဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကျမ ငယ်ငယ်က သင်ကြားခဲ့ရတဲ့ ခရစ်ယာန်ဓမ္မဒေသနာတော်တွေကို ပြန် ဝေဖန်သုံးသပ်မိတယ်။ အမှန်တော့ ဘုရားသခင်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ လူသားအားလုံးအတွက် ဖြစ်တယ်လို့ပဲ ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တာပါ။ သခင်ယေရှုကလည်း ကိုယ်နဲ့ စပ်ဆိုင်သောသူကို ကိုယ်နဲ့အမျှချစ်ဖို့ပဲသွန်သင်ခဲ့တယ်။ ကိုယ်နဲ့စပ်ဆိုင်သောသူတွေ ဆိုတဲ့ အထဲမှာ ဂေး တွေ လိင်တူချစ်သူတွေမပါဘူးလို့ သခင်ခရစ်တော် ဘယ်တုန်းကမှ မပြောခဲ့ပါဘူး။
သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာ သူ့ရဲ့ဘဝတခုလုံးမှာ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကနေ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့သူတွေ၊ မသန့်ရှင်းတဲ့သူတွေလို့ ပြောဆို သတ်မှတ် ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေ၊ ပြီးတော့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ခွဲခြားဖိနှပ် ရှောင်ပယ်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေနဲ့ပဲ လက်ပွန်းသတီးနေထိုင်အသက်ရှင်ခဲ့တာပါ။ အညတရ ဒုက္ခိတတွေနဲ့ အစွန့်ပစ်ခံတွေကိုသာ သခင်ယေရှုက ပေါင်းသင်းခဲ့တာပါ။ တခုတော့ရှိတယ် သခင်ခရစ်တော်က ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနဲ့ ပြောဆို ဆက်ဆံခဲ့တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ အရမ်းကိုမှန်ကန်ပါတယ်၊ ဖြောင့်မတ်ပါတယ်၊ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းပါတယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ ကျမ်းတတ်ဖာရိရှဲတွေကိုပဲရှိခဲ့တာပါ။
အဲဒီအဖြစ်အပျက်တွေက ကျမကို သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ လိင်တူချင်းချစ်တဲ့သူတွေ (Homosexuality) နဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာတွေများပြောထားလဲဆိုတာကို ပိုပြီးစူးစမ်းလေ့လာချင်စိတ်ကို ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ့ဒီမနက်မှာ ဒီအကြောင်းကို အသေးစိတ်ပြောလို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်။ နောက်နောင်အချိန်ရှိတဲ့အခါမှပဲ ဒီအကြောင်းကို ဆက်ဆွေးနွေးကြရအောင်လားနော်။ ဒါပေမယ့် ကျမကို အကျည်းချုပ်လေးပြောပါရစေ သမ္မကျမ်းစာထဲမှာ လိင်တူချင်းချစ်ခင်စုံမက်တဲ့သူ (Homosexuality) ဆိုတဲ့ စကားလုံးက တလုံးမှမပါရိ်ှခဲ့ပါဘူး။ ဒီစကားလုံးကို စတီထွင်အသုံးပြုလာခဲ့တာမှဖြင့် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၈၉ဝ ခုနှစ်လောက်ကမှပေါ်လာတာပါ။
သို့သော်ငြားလည်း လိင်တူချင်းစုံမက်သူတွေရဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အပြုအမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ ဖော်ပြာထားတဲ့ ကျမ်းချက် ခုနှစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်။ ပထမက သောဒုံနဲ့ ဂေါ်မောရမြိုုနှစ်မြို့အကြောင်းပါ။ အဲဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်လို့လဲ ကျမပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကဟောပြီးသွားပါပြီး။ ဒီမြို့နှစ်မြို့ကို မီးလောင်တိုက်သွင်းလိုက်ရတာဟာ အသက်အရွယ်ပြည့်ပြီးတဲ့ လိင်တူနှစ်ယောက်ကြားက ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေအတွက်ကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။
အဓိကတော့ လိင်မှုကိစ္စကို မတရားကျူးလွန်တပ်မက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့် ဘုရားက ပြစ်ဒဏ်စီရင်ချက်ချတာပါ။ သေသေချာချာဖတ်ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် အဲဒီမြု့ိသားတွေဟာ လိင်တူဆက်ဆံတာကို ခုံမင်နေတဲ့သူတွေ သက်သက်မဟုတ်ပါဘူး သက်သက်ကို ကိလေသာသောမှာပျော်မြူးနေကြတဲ့ သူတွေဆိုတာကို လော့ဒ် က သူသမီးနှစ်ယောက်ကိုတောင် ပေးဖို့ကမ်းလှမ်းတဲ့ အချက်မှာ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
နောက်တချက် တရာဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး ၂၃ မှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာဟာဆိုရင်လည်း ခါနန်လူမျိုးတွေရဲ့ မျိုးဆက်ပြန့်ပွားမှု ထုံးတမ်းဓလေ့တွေ ဂျူးဘာသာကို ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးသွားမှာကို စိုးရိမ်တဲ့အတွက် တားမြစ်ထားတဲ့အချက်ပါ။ ပြီးတော့ ကောရိန္တုဩဝါဒစာ ပထမစောင်နဲ့ တိမောတေဩဝါဒစာ ပထမစောင်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာလည်း လိင်တူချင်းချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမဟုတ်ပဲ အမျိုးသားပြည့်တန်ဆာတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ ဝတ်ပြုရာကျမ်းမှာလည်း လိင်တူချင်းဆက်ဆံတာကို တားမြစ်ထားတဲ့ ကျမ်းပိုဒ်နှစ်ပိုဒ် ရှိပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒါကိုတော့ကျမ နည်းနည်းအကျယ်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ ဝတ်ပြုရာကျမ်းမှာက ခုနက လိင်တူဆက်ဆံတာတခုတည်းကိုပဲ တားမြစ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး တခြားအချက်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ် – ဥပမာ ဓမ္မတာလာနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကို သွားကိုင်မိ ထိမိတဲ့ ယောက်ျားဆိုရင် ကျောက်ခဲနဲ့အသေပစ်ပေါက်တတ်ရမယ်လို့ပြောထားပါတယ်၊ ပြီးတော့ အဲဒါတင်မကပါဘူး အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ပြီးဆိုရင် သေဒဏ်ပေးရသလို လူမျိုးခြားနဲ့ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းဟာ ကြီးလေတဲ့ပြစ်မှုတွေပါ၊ နောက် တသက်လုံးမစားသင့်တဲ့ အစားအစာဆိုတာမျိုးတွေကို သတ်မှတ်ပေးထားသလို အမျိုးမတူတဲ့ အဝတ်အထည်နှစ်မျိုးကိုလည်း တဆင်ထဲဝတ်ဆင်ခွင့်မရှိပါဘူး။
ကျမဆိုလိုချင်တာက ဒီလိုပါ ဘယ်လောက်ပဲ ခရစ်ယာန်ပီသတဲ့ ရှေးရိုးစွဲခရစ်ယာန်ဝါဒီတယောက် ဖြစ်ပါစေ ဘယ်သူမှ ခုနကပြောခဲ့တဲ့ ဝတ်ပြုရာကျမ်းထဲက အချက်တွေကို တသွေမတိမ်းလိုက်နာနိုင်မယ့်သူ တယောက်မှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့်ကျမပြောချင်တာက ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ ဒေသန္တာရနောက်ခံအခြေအနေမှာ ဖြစ်တည်နေခဲ့တဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်းအစဉ်အလာ ကျင့်ထုံးတွေနဲ့ ရှေးရိုးစွဲ ပုံစံအမြင်တွေကို ဖယ်ပြီးတော့ တကယ့် ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော် အစစ်အမှန်ဟာဘာလဲ ဆိုတာကို အမိအရယူခိုင်းစေချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျမပြောချင်တာက စာအိပ်ထဲကထွက်လာတဲ့စာထဲက အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကို လိုက်နာမှတ်ယူနေမယ့်အစာ အဲဒီစာထဲကအဓိကပြောချင်တဲ့ စကား သတင်းအချက်အလက်က ဘာလဲဆိုတာကိုပဲ ကောက်ယူတတ်ဖို့လိုပါတယ်။
လိင်တူချင်းစုံမက်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ သမ္မာကျမ်းစာမှာနောက်ဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တဲ့ကျမ်းချက်တချက်ကတော့ ဓမမ္မသစ်ကျမ်းမှာပါတဲ့ တမန်တော်ရှင်ပေါလုရေးခဲ့ ရောမဩဝါဒစာမှာပါတဲ့ ကျမ်းချက်ပါပဲ။ အဲဒီမှာသူက လိင်တူချင်းဆက်ဆံတဲ့အပြုအမှုတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ ဆိုတော့ အဲဒီကျမ်းကိုရေးခဲ့တဲ့အချိန်အခါတုန်းက ရောမမြို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းအခြေအနေကို တချက်လှမ်းပြီး ပြန်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် ရှင်ပေါလုပြောတာမှန်တာပေါ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆို အဲဒီအချိန်အခါမှာ ရောမအမျိုးသားတွေ အတော်များများဟာ အသက်ကြီးလာရင် အသက်ငယ်ငယ်ယောက်ျားလေးတွေကို ယူပြီးမှေထုန်မှီဝေးတဲ့ ဓလေ့ကကြီးစိုးနေခဲ့တာလေ၊ ဆိုတော့ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးငယ်တွေကို ဒီလိုအသက်ကြီးတဲ့လူတွေက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်စော်ကားနေတာကို ရှင်ပေါလု ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင့်ခဲ့တာမမှားပါဘူး။
အိုကေ ကျမတို့ ရှင်ပေါလုရဲ့ တားမြစ်ချက်ကို ထပ်တဆင့်တိုး ဆင်ချေတက်ပြီး ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရအောင် တကယ်လို့သာ ရှင်ပေါလုက ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လိင်တူချင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အပြုအမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ လိင်တူချင်းချစ်တာဖြစ်ဖြစ် ဆက်ဆံတာဖြစ်ဖြစ် အားလုံးကို သူက ကန့်ကွက်ချင်တယ်ဆိုပါဆို့၊ ဒါဆိုရင် ရှင်ပေါလုသွန်သင်ခဲ့တဲ့ တခြားလိုက်နာရမယ့် ကျမ်းချက်တွေကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြစို့၊ သူကပြောတယ် အမျိုးသမီးတွေက သူတပါးကို စာမသင်ပေးရဘူး ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဆရာမလုပ်ရဘူးပေါ့၊ ပြီးတော့ ဆံပင်မညှပ်ရဘူး၊ ဘုရားကျောင်ထဲမှာစကားမပြောရဘူးလို့ တားမြစ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒါကို ဒီနေ့ဘယ်သူလိုက်နာနိုင်လဲ လိုက်နာတဲ့သူကောရှိသေးရဲ့လား၊ ပြီးတော့ သူက ကျွန်ဟာသခင်ရဲ့ စကားကိုနာခံရမယ် တကြိမ်မက ငါကြိမ်တိုင်အောင်နာခံနိုင်ရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ ဒီကနေ့ အဲဒီအချက်ကိုလက်ခံနိုင်ကြသေးရဲ့လား မိတ်ဆွေတို့ စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ အမေရိက တောင်ပိုင်းမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင် ၁၅ဝ လောက်ကဒီစကားကိုလက်ခံခဲ့ကြတယ် အဲဒါ ဘုရားသခင်ရဲ့ စိတ်ဆန္ဒ အလိုတော်အမှန်တကယ် ဖြစ်တယ်လို့ ရှင်တို့ကျမတို့ ဒီနေ့လက်ခံနိုင်လား စဉ်းစားကြပါ ညီအကိုမောင်နှမတို့။
ဆိုတော့ကျမကလည်း ပြောရတော့မယ် ကျမက ရှင်ပေါလုရဲ့ နောက်လိုက်တပည့်မဟုတ်ဘူး၊ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ပြောခဲ့ပါတယ် ငါ့နောက်မလိုက်ကြနဲ့ တဲ့ သခင်ခရစ်တော်နောက်ကိုသာ လိုက်လျောက်ကြပါတဲ့၊ အဲဒီတော့က ကျမတို့ရဲ့ ယုံကြည့်ခြင်းအရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့ သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ ဆုံးမသွန်မှုဖက်ကို ပြန်လှည့်ကြပါစို့။ဆိုတော့ သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ အလင်းရောင်အောက်ကနေ ကျမတို့က သမ္မာကျျမ်းစာထဲက ဆုံးမသွန်သင်မှုတွေကို ဝေဖန်းသုံးသပ်ရမယ်။ သမ္မာကျမ်းစာတခုလုံးမှာ လိင်တူချင်းချစ်တဲ့ သူတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျမ်းပိုဒ် စုစုပေါင် ခုနှစ်ပိုဒ်ရှိပါတယ်။
အဲဒီကျမ်းချက် ခုနှစ်ချက်စလုံးဟာ ဒီနေ့ဒီအချိန်အခါနဲ့ နှိုင်းပြီးငြင်းခုံကြမယ်ဆိုရင် ဆုံးနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အရေးကြီးတာက ကျမတို့ဘဝမှာ သခင်ခရစ်တော် သွန်သင်ဆုံးမထားခဲ့တဲ့ အရာတွေအများကြီးပါ၊ သူပြောခဲ့တာက လူသားအားလုံးပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ကြရမယ်၊ ကိုယ့်နဲ့စပ်ဆိုင်တဲ့သူ ကိုယ်အိမ်နီးနားခြင်းကို ကိုယ်နဲ့အမျှချစ်ရမယ်၊ တရားစီရင်မယ့်ကိစ္စဟာ လူသားအချင်းချင်းပြုလုပ်ရမယ့် အလုပ်မဟုတ်ဘူး အဲဒါဘုရားသခင်ရဲ့တာဝန်လို့ ပြောခဲ့တာကို မှတ်မိကြမှာပါ။
ချစ်သောညီအကိုမောင်နှမတို့ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျမ ဝေါ်လိန်ဖော့ဒ် အသင်းတော်မှာ အမှုတော်ဆောင်ရင်းနဲ့ ဆယ်လီနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကို ကျမသင်ကြားတတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ ဓမ္မပညာရပ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တခုအဖြစ် နှလုံးသားထဲထိအောင်ကို စွဲမှတ်ယူထားလိုက်တော့တာပါ။ အဲဒီနောက်ပိုင်းကစလို့ ဘုရားကျောင်းထဲက သံစုံတေးသီချင်းအဖွဲ၊ အသင်းတော်ကော်မတီ၊ ဘုရားဝတ်ပြုချိန်အစရှိတဲ့ အစီအစဉ်တိုင်းမှာ ဂေးတွေရော ဂေးမဟုတ်တဲ့သူရောအပါအဝင် အားလုံးအတူတကွ ပျော်ပျော်ရွင်ရွင်နဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ ဂုဏ်တော်နဲ့ မေတ္တာတော်ကို ဝိုင်းဝန်းချီမွမ်းနိုင် အောင် ကျမတို့ ကြိုပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။
ကဲကျမပြောသွားခဲ့တာကလည်း အတော်လည်းကို များသွားပါပြီ၊ ဆိုတော့ ဒီမနက်ပြောသွားတဲ့ ခေါင်းစဉ် မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ “လိင်တူချင်းချစ်တာဟာ၊ စုံမက်တာဟာ တကယ်အပြစ်ရှိပါသလား” လို့ ကျမကိုမေးရင်တော့ ကျမကတော့ “အပြစ်မရှိပါဘူး”လို့ပဲဖြေရပါလိမ်မယ်။ အဲဒီလိုဖြေလိုက်လို့ ကျမများမှားခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း ကျမဘုရားသခင်ကို တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျမ လုံးဝတထစ်ချယုံကြည့်တာကတော့ လိင်တူချင်းချစ်တာ စုံမက်တာဟာ ကျမတို့ ဘာသာရေးရှုထောင့်ကနေပြီး လူမှုရေးကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် ဆံပင် အနက်၊ အဝါပေါက်လာတဲ့သူ၊ အရမ်ရှည်တာ ပုတာ၊ ဘယ်သန် ညာသန် စတဲ့မွေးရာပါတွေလိုပဲလို့ ကျမကမြင်ပါတယ်။
လိင်တူဖြစ်နေပါစေ၊ လိင်ကွဲပဲဖြစ်နေပါစေ ဘယ်သူမဆို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အပြစ်တွေ၊ အလွဲသုံးစားလုပ်တာတွေ၊ တဖက်သားကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အနိုင်ကျင့်စော်ကားတဲ့ဟာတွေကို ကျူးလွန်တတ်ကြတာပါပဲ၊ ထိုနည်းလည်းကောင်း လိင်တူပဲဖြစ်ပါစေ၊ လိင်ကွဲပဲဖြစ်နေပါစေ တသက်လုံးကြင်ကြင်နာနာ နဲ့ တသက်လုံးရိုးမြေကျပေါင်းသင်းနေထိုင်သွားတဲ့ သူတွေလည်း အများအပြားပါ။ ဒီကနေ့ဒီအချိန်အထိ သင်းအုပ်ဆရာမ တယောက်အနေနဲ့ ကျမလက်ခံယုံကြည့်ထားတဲ့အရာက အသင်းတော်ထဲမှာ လူမှုကျင့်ဝတ်သိက္ခာဆိုတဲ့ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်ဟာ လိင်တူ လိင်ကွဲနှစ်မျိုး
ကျနော်နဲ့ (၆) ဂဏန်း
ကျနော်ငယ်ငယ်က (၆) ဆိုတဲ့ ကိန်းဂဏန်းကို တော်တော်စိတ်နာခဲ့မိပါတယ်။ (၆) ဆိုတဲ့ ဂဏန်းဟာ ကျနော် ကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့ မူလတန်းအချိန်မှာ တစ်၊ နှစ်၊ သုံး၊ လေး၊ ငါး၊ ခြောက် စတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေ ရေတွက်တဲ့ နေရာမှာဖြစ်စေ အလီတွေကို သံပြိုင်ဆိုရာမှာဖြစ်စေ နားဝင်ချိုစရာ ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း အလယ်တန်း ရောက်တဲ့အခါကျတော့ ကျနော့်အပေါ် တော်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့ ဂဏန်းတလုံး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မှတ်မှတ်ရရ ကျနော် (၇) တန်းရောက်တဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းကို ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။ ကျောင်းသားသစ်ဖြစ်တဲ့အပြင် ကျနော်နေခဲ့တဲ့ကျောင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ ကျောင်းလိုက်ပို့ခံရတဲ့ ရှားရှားပါးပါး ကျောင်းသားတွေထဲမှာ ကျနော်တယောက် ပါဝင်နေတဲ့အတွက် ကျောင်းသူတွေကြားမှာ ရေပန်းစားခဲ့ရပါတယ်။
အသက် ၁၃ နှစ်၊ ၁၄ နှစ်ဆိုတဲ့ အသက်ကလဲ ငယ်သေးတယ် ပြောလို့ရနိုင်ပေမယ့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ဖြစ်လာတဲ့အတွက် အချစ်ဆိုတာ ဘာရယ် သေသေချာချာ နားမလည်သေးပေမယ့် ရင်ခုန်စ၊ စိတ်ကူးယဉ်တတ်ကာစ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ကျနော်နဲ့ ခုံချင်းကပ်သောသူကလဲ ခုနှစ်တန်းကို တစ်ခါကျ အသက်က (၁၇) နှစ်အရွယ် အတွေ့အကြုံစုံတဲ့ ကဗျာသမား စာသမားတယောက် ဖြစ်နေပါတယ်။
ကျနော်တို့ လူငယ်တွေအဖို့တော့ သူဟာ ဆရာကြီးတပါးပါ။ ရည်းစားစထားဖို့ မြှောက်ပေးတာကတစ်မျိုး ရည်းစားစာရေးနည်း သင်ပေးတာကတစ်ဖုံ ကျနော်တို့ အကောင်ငယ်လေးတွေကို နည်းလမ်းမျှဝေ သင်ကြားပေးတဲ့ ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီး ဆိုရင်လဲ မှားမည်မထင်ပါ။
ထိုဆရာကြီးကြောင့် ဆယ်ကျော်သက်ကျနော့်ခမျာ စိတ်ကစားတာတွေ စလာပြီး ရင်ခုန်ချင်လာမိပါတယ်။ ခေတ်မှီသူတိုင်း ရင်ခုန်တတ်ကြသည်ဆိုတဲ့ စကားလိုပေါ့ဗျာ။ လူပျိုပေါက်လာပြီဆိုတာကို ရည်းစားထားခြင်းနဲ့ သက်သေပြရသည်ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းဆရာကြီးရဲ့ အဆိုအမိန့်အရ ရည်းစားရရှိရေး ဒို့အရေးဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို လက်ကိုင်ပြုပြီး ကျနော်ကြိုးစားပါတော့တယ်။
အတန်းထဲက ချောပါတယ်ဆိုတဲ့၊ လှပါတယ်ဆိုတဲ့ အခုခေတ်စကားအရ လန်းလှပါသည်ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတွေကို လိုက်ရင်ခုန်ကြည့်မိပါတယ်။ အပြောင်အနောက် စကားလေးတွေနဲ့ စမိ နောက်မိပါတယ်။ အချစ်ဆိုတာကို သေသေချာချာ နားမလည်သေးပေမယ့် ရည်းစားရှိတာ သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ ကြွားစရာတခုဆိုတဲ့ အတွေးကြောင့် ကောင်မလေးတွေတချို့ကို နှုတ်နဲ့တမျိုး၊ စာနဲ့တဖုံ ကြိုးပမ်းခဲ့မိပါတယ်။
ကောင်မလေးတွေကလည်း အိုက်တင်တွေပေးရင်း ရေလာမြောင်းပေးလုပ်ရင်း အီစီကလီ ဇာတ်လမ်းလေးတွေ စဖို့ကြိုးစားမိခဲ့တာ အသေအချာပါဘဲ။ ခက်တာက ပြဿနာကို ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီကောင်မလေးတွေကို ရင်ခုန်သလိုလို ဖြစ်မိပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ ကျနော်အမှန်တကယ် ရင်မခုန်မိမှန်း ကျနော့်ကိုယ်ကျနော် သဘောပေါက် နေမိပါတယ်။ သူငယ်ချင်းများက မြှောက်ပေးလို့ လှပါသည်ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကို အီစီကလီလုပ်လိုက်၊ ကောင်မလေးက အထာပြန်ပေးလေလေ ဇောချွေးပြန်လေလေ ဖြစ်နေတတ်တဲ့ ကျနော့်ကို သူငယ်ချင်းဆရာကြီးက တနေ့မှာ မေးခွန်းထုတ်လာ ပါတော့တယ်။
“မင်းက ဘာဖြစ်တာလဲ အခြောက်လား” ဆိုတဲ့ စကားလုံးက ကျနော်ကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြား သွားစေခဲ့မိပါတယ်။ အခြောက်ဆိုတဲ့ စကားလုံးက ကျနော်တို့ခေတ်မှာ တော်တော်လေး စော်ကားတဲ့၊ အခေါ်ခံရရင် နာကြည်းစရာကောင်းတဲ့ ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ သိက္ခာကို အထိခိုက်ဆုံး စကားလုံး ဖြစ်ပါတယ်။ အကိုလိုခင်မင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းဆရာကြီးမို့လို့သာ ပြန်မပြောရပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ တော်တော်ထိခိုက်သွားမိပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲ “ငါ အခြောက် မဟုတ်ဘူး၊ ငါ အခြောက် မဟုတ်စေရဘူး” ဆိုပြီး အကြိမ်ကြိမ် ရေရွတ်နေခဲ့မိပါတယ်။
တနေ့မှာတော့ ထိုမေးခွန်းအတွက် အဖြေကို ကျနော် သိရှိလိုက်ရပါတော့တယ်။ ခုနစ်တန်းအောင်ပြီး ရှစ်တန်းတက်တဲ့အခါ ကျောင်းရဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေမှာ ပါဝင်ရင်း လူမှုလုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်လာခဲ့တဲ့အတွက် ကျနော့်ကို ပိုမိုလူသိများလာခဲ့ပါတယ်။ ကြက်ခြေနီမှာလဲပါ၊ အနုပညာမှာလဲပါရင်း သင်တန်းတခုမှာတော့ ကျနော်ရဲ့ ရင်ခုန်စရာဇာတ်လမ်းလေး စလာခဲ့မိပါတော့တယ်။ သူလေးတယောက်ကို တွေ့တွေ့ချင်း ရင်ခုန်မိသွားခြင်းလို့ ပြောရင် မှားမယ်လို့ မထင်ပါ။
ဘင်ခရာသင်တန်း တက်နေတဲ့သူလေးကို ကျနော်မြင်မြင်ချင်း ကြွေမိသွားတယ်ဆိုတာ ကျနော် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဝန်ခံလိုက်ရတော့တယ်။ ဘင်ခရာသင်တန်းအတွက် နုတ်တွေလိုက်ရေးနေတဲ့ သူလေးကို မြင်လိုက်တဲ့ အချိန်ကစပြီး ကျနော့်နှလုံးသားတွေ လျှပ်စီးတွေ တဖြန်းဖြန်းလက်ကာ မိုးကြိုးတွေပစ်ကုန်မိတော့တယ်။ သူလေးကို စိုက်ကြည့်နေမိတဲ့ခဏ သူလေးကခေါင်းပြန်အမော့ စိုက်ကြည့်နေမိတဲ့ ကျနော့်ကိုမြင်တော့ မသိမသာပြုံးလိုက်တဲ့ အပြံးတချက်မှာ ကျနော် ကျဆုံးသွားမိပါတော့တယ်။
ဒါများ ဘာများထူးဆန်းသလဲ ဆိုပြီးတော့ စာဖတ်သူများ မေးခွန်းထုတ်ကောင်း ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကစား ကာစ ကောင်လေး တယောက်က ကောင်မလေးကိုတွေ့လို့ ကြွေတာများ ဆန်းသလားကွာလို့လဲ ပြောကောင်း ပြောနိုင်ပါတယ်။ အံ့အားသင့်စရာ ကောင်းတာက ကျနော်ကြွေမိသွားသော ဇာတ်လမ်းလေးဟာ ကျောင်းစိမ်းထမီနဲ့ ရင်ဖုံးလေး ဝတ်ထားတဲ့ ကျောင်းသူမလေး မဟုတ်ဘဲ ဆံပင်တိုတို ဘောင်းဘီလေး ဝတ်ထားတဲ့ ကျောင်းသားလေး တယောက် ဖြစ်နေမိတာကြောင့်ပါ။
ရင်ခုန်မိပါတယ်။ အဲဒီနေ့က မိုးမရွာပါ။ ကျနော့်ကို သနားလို့ တိမ်တွေလဲ ငိုမချကြပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော် တညလုံး ဖီးလ်တက်သွားမိပါတယ်။ သူလေးရဲ့ အပြုံးလေးကို ပျောက်သွားမှာ စိုးတဲ့အတွက် စိတ်ကူးယဉ်မှိတ်ထားတဲ့ မျက်လုံးအစုံကိုတောင် ပြန်ဖွင့်မကြည့်ချင်ပါ။ အဲဒီလောက်အထိ ရူးသွပ်စွာ ရင်ခုန်မိသွားခဲ့ပါတယ်။
သူလေးရဲ့အပြုံး၊ သူလေးရဲ့အကြည့်၊ သူလေးရဲ့ မျက်နှာပေါ်က မှည့်လေးကအစ ကျနော်အာရုံထဲမှာ ထင်ထင်ရှားရှား ပေါ်လာလေ၊ သူလေးအကြောင်းကို စဉ်းစားမိလေ ပိုရင်ခုန်လေ။ အတင်းကြီး ရင်ခုန်ရအောင် လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ရင်မခုန်ခဲ့ရသော ကောင်မလေးများနဲ့ ကွာပါ့ဗျာ။
အတန်းဖော် အကိုကြီးမေးတဲ့ မေးခွန်းကို ဒီနေ့မှာ ကျနော် အလိုလိုဖြေမိသွားပါတယ်။ ကောင်မလေးတွေကို ဘာကြောင့် ရင်မခုန်ခဲ့လဲ ဆိုတာကိုလဲ ကျနော် တော်တော်လေး နားလည်သဘောပေါက် မိသွားပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော်ဟာ ကောင်မလေးတွေကို ရင်မခုန်တတ်မိပေမယ့် ကောင်လေး အချင်းချင်းကိုတော့ ရင်ခုန်တတ်တဲ့ လိင်တူချစ်သူတယောက် (အများအခေါ် အခြောက်) ဖြစ်နေတာကို ထင်ထင်ရှားရှား သိမြင်လိုက်ရပါတော့တယ်။
ဒီလို သိလိုက်တာကို သဘောပေါက်မိတာနဲ့ တပြိုင်နက် ကျနော် ခေါင်းနပမ်း ကြီးမိသွားပါတော့တယ်။ ကျနော် ဒီလိုဖြစ်တာကို မိဘတွေကသာ သိရှိသွားရင်၊ သူငယ်ချင်းတွေကသာ သိရှိသွားရင် ဘယ်လိုဆက်ဆံကြမလဲ၊ ဘယ်လိုမျိုး ပြောကြမလဲ ဆိုတာတွေးရင်း ဇောချွေးတွေ ထွက်လာမိသည့် အထိပါပဲ။ ယောကျာ်းလေး အများအပြားရှိတဲ့ ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း၊ ယောက်ျား ပီသမှုကို ဦးစားပေးတဲ့ စစ်တပ်နောက်ခံ ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း လူအများက အထင်သေး စော်ကားချင်ကြတဲ့ အခြောက်တယောက်အဖြစ် ကျနော်ရောက်နေသည်ကို သိများသိလျှင် မတွေးဝံ့စရာ။
ထိုသို့ တွေးမိသော်လည်း သူလေးကို ချစ်မိတဲ့စိတ်က ဂျပန်ဆူနာမီရေလှိုင်းလို တလိမ့်လိမ့်တက်လာနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန် နူးကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖိုပေါက်ကွဲမှုထက် သူလေးနဲ့ ခင်မင်ခွင့်ရရေးက ပိုအရေးကြီး နေခဲ့ပါတယ်။ သူလေးရဲ့ အနားကပ်ရရေးက ကျနော့်အတွက် ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးထက် ပိုအရေးပါ နေခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းသေးသေးလေးမှာ ဒီကိစ္စအတွက် သိပ်မလှုပ်ရှားလိုက်ရပါ။ သူလေးအကြောင်းကို အပြည့်အစုံ သိလိုက်ရပါတယ်။ သိလိုက်ရတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူလေးနဲ့ ရင်းနှီးနိုင်ဖို့ အရေးတကြီး လုံးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ သူလေးတက်တဲ့ ဘင်ခရာသင်တန်းမှာ လိုက်တက်၊ သင်တန်းချိန်မှာ သူ့ဘေးနားခုံမှာရအောင် လိုက်ထိုင်ရင်း သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ ရှစ်တန်းချင်းတူပေမယ့် အတန်းခွဲချင်း မတူတဲ့အတွက် မုန့်စားဆင်းချိန်မှာ အတန်းဖော်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မတွဲဖြစ်တော့ဘဲ သူလေးနဲ့ အတူတူသာ နေဖြစ်တော့လို့ တချို့သူငယ်ချင်းတွေက ပြောင်လှောင်လာသည့် အထိပါပဲ။
သူလေးကလဲ အ, တာလား ဘာလားတော့ မသိ၊ ကိုယ့်ရဲ့ လွန်ကဲတဲ့ ဂရုစိုက်မှုတွေကို ကျေကျေနပ်နပ် အသိအမှတ် ပြုလာခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ကပေးတဲ့ မုန့်ဖိုးလေးတွေကိုစုပြီး ကျူရှင်ပြေး၊ ရန်ကုန်မြို့ထဲ ရုပ်ရှင်ခိုးကြည့်တာတွေ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း နေကြာစေ့တွေကို ကိုယ်တိုင်အခွံနွှာပြီး ကျွေးခဲ့တာတွေ၊ ဗိုလ်ချုပ်ပန်းခြံထဲမှာ လျှောက်သွားတာတွေ၊ သူလေးအတွက် အထိမ်းအမှတ်မျိုးစုံနဲ့ လက်ဆောင်ပေးတာတွေ၊ အိုး — ပြန်တွေးကြည့်ရင် ရင်ခုန်စရာအပြည့် လွမ်းရတဲ့ အဖြစ်လေးတွေကလည်း တပုံတပင်။
အဲဒီခေတ်တုန်းက ကျနော်တို့ကျောင်းမှာ ဖေးဖရိတ်ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေးတွေ တော်တော်ခေတ်စားခဲ့ပါတယ်။ ဗလာစာအုပ်လေးထဲက စာရွက်တရွက်ချင်းစီမှာ မေးခွန်းလေးတွေ ရေးထားပြီး ကိုယ်ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ဒီမေးခွန်းလေးတွေကို ဖြေခိုင်းတာမျိုးပေါ့။ မေးခွန်းတွေ အဖြေတွေကလဲ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာလေးတွေ၊ ရယ်စရာ ဟာသလေးတွေပါ၊ မိုးစက်တွေကြား အတွေးများဆိုရင် ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ပြီး လျှောက်ပြေးချင်တယ်လို့၊ စောင်ခြုံပြီး စိတ်ကူးနေမယ် ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့။
တရက်မှာတော့ ကျနော့်ကို ကောင်မလေး သူငယ်ချင်းတယောက်က သူ့ဖေးဖရိတ်စာအုပ်မှာ ရေးပေးဖို့ စာအုပ်လာပေးပါတယ်။ အရင်ကလဲ ရေးနေကျဆိုတော့ ဟုတ်ပြီပေါ့။ ရေးမယ်ဆိုပြီး စာအုပ်ဖွင့်လိုက်တော့ မေးခွန်းတွေက အစုံသား။ ကျောင်းပြီးရင် ဘာလုပ်မှာလဲတို့၊ အသည်းဘယ်နှစ်ခါ ကွဲဘူးလဲတို့ စသည်ဖြင့် စသည်ဖြင့်ပေါ့။
တနေရာမှာတော့ မေးထားတာက ရင်ခုန်ရတဲ့ ချစ်သူရှိရင် အမည်လေးပြောပြပါတဲ့၊ ဘယ်ရမလဲ ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူလေးရဲ့အမည်ကို အတိုကောက်လေး ရေးပေးလိုက်မိပါတယ်။ အချစ်သူရဲကောင်းပေါ့လေ။ အတိုကောက်လေးဆိုတော့ ဘယ်သူမှ မသိလောက်ဘူးဆိုပြီး ရင်ဖွင့်လိုက်တာ၊ ပြဿနာက အဲဒီက စတော့တာပါဘဲ။
သူငယ်ချင်း ကောင်မလေးကို ဖေးဖရိတ်ရေးပြီး ပြန်ပေးလိုက်တဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ လူတွေက ကိုယ့်ကိုတွေ့ရင် တိုးတိုးတိုးတိုးနဲ့ ပြောလာတာကို သတိထားမိလာပါလေရော။ ကောင်မလေးတွေက ပြုံးစိစိနဲ့ ကြည့်ကြည့်လာတာတွေကို သိလာမိတယ်။ ပထမတော့ ဘာအထာလဲပေါ့၊ နောက်ပိုင်းကျတော့မှ သူတို့ပြုံးစိပြုံးစိ ဇာတ်လမ်းက ကျနော်ရေးလိုက်တဲ့ ဖေးဖရိတ်စာအုပ်က စတယ်ဆိုတာ သိလာခဲ့ရတယ်။
ကျနော် အတိုကောက်ရေးလိုက်တဲ့ ချစ်သူအမည်အတိုလေးကို စာအုပ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ ဆားပုလင်းနှင်းမောင်ရဲ့ မယားပါသမီး ကျေးဇူးရှင်မက စိတ်ဝင်စားတော်မူပြီး သဲလွန်စ လိုက်ရှာလိုက်တာ နောက်ဆုံး ကျနော်သူလေးရဲ့ အမည်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပြီး တကျောင်းလုံးကို စေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်ဖြန့်လိုက်တာ တကျောင်းလုံးကို ဟိုးဟိုးကျော်ရောပေါ့။ ကောင်းရော။
ဒီလိုတွေ ဖြစ်လာတော့ သူလေးကလဲ ကျနော်ကို အရင်လို မတွဲတော့ဘူး၊ သူစိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုတာ သိနေ သဘောပေါက်နေတယ်လေ။ သွားစကားပြောရင် မျက်လုံးစိမ်းနဲ့ကြည့်ပြီး ရွံသလိုအကြည့်နဲ့ လှည့်ထွက်သွားတာ အသဲအနာဆုံးဗျ။
ဟာဗျာ ရင်ထဲမှာ ခံစားလိုက်ရတာ။ အဲဒီအချိန်တုန်းကသာ အယ်ဆိုင်းဇီသီချင်းတွေ ကာရာအိုကေဆိုင်တွေသာ ရှိနေရင် ခံစားလို့ ကောင်းလိုက်မယ့် ဖြစ်ခြင်း၊ “ဒို့ အသဲလေး နုနုနယ်နယ် ထိခိုက်ပွန်းပဲ့လွယ်တယ်” ဆိုတဲ့ သီချင်းတွေကို ကာရာအိုကေဆိုင်မှာ ညလုံးပေါက် သွားဟဲဖြစ်မလား မသိဘူးဗျို့။
တရက်မှာ စောစောကပြောခဲ့တဲ့ (၆) ဂဏန်း ဇာတ်လမ်းက စလာပါလေရော။
ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ၊ ထမင်းစားချိန်တခုမှာ သူလေးများ စိတ်ပြေလာမလားဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ သူလေးအတန်းနားဖြတ်ပြီး မျှော်တော်ယောင် လုပ်မိတယ်လေ။ သူလေးရဲ့ အရိပ်အယောင်လေးတွေ တွေ့မိပြီဆိုရင် ဒီညအတွက်ကတော့ လွမ်းစရာ ဇာတ်လမ်းလေး ရပြီပေါ့။ ဒီအချိန်မှာ သူလေးကလဲ ကော်ရစ်ဒါမှာ သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရပ်ပြီးစကားပြောနေတာ တွေ့လိုက်တော့ ကျေနပ်သွားတယ်။ အကယ်ဒမီကွက်တွေဖမ်းပြီး သူလေးကို မော့ကြည့်၊ သူလေးများပြန်ကြည့်ရင် တောင်းပန်တဲ့ မျက်ဝန်းနဲ့ သူလေးစိတ်ကို ပြန်ဆွဲဆောင်မယ်ပေါ့။
ဖြစ်နိုင်ရင် နှလုံးသားမြို့တော်ထဲမှာ မို့မို့မြင့်အောင် အကယ်ဒမီရသွားတဲ့ အကွက်လို မျက်ရည်တပေါက်က တဖက်ထဲ စီးကျလာ သူလေးကကြည့်ပြီး သနားသွား ဇာတ်လမ်းတွေပြန်ဖြစ် အမလေး ကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ် ဟုတ်နေတာဘဲ။ ဒီလိုစိတ်ကူးတွေ ဇာတ်ညွန်းတွေအပြည့်နဲ့ ကိုယ်ဖာသာကို ဒါရိုက်တာ၊ ကိုယ်ဖာသာကိုယ် စီစဉ်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် မင်းသမီးတွေလုပ်ပြီး ချီတက်လာတာလေ။ အနားရောက်တော့ ကိုယ်ဆင်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး ဂွမ်းသွားတဲ့ပုံက ဒီလိုလေ။
ခေါင်းလေးငုံ့လို့ ကိုယ်တလှမ်းချင်း လှမ်းလာရင်း စစချင်းမြင်လိုက်ရတာ မန္တလေးကတ္တီပါ ခြေညှပ်ဖိနပ် သဲကြိုးအနီစီးထားတဲ့ ချစ်သူလေးရဲ့ ခြေထောက်ပေါ့။ အခုအချိန်အထိ ညာဖက်ဖိနပ်မှာ သဲကြိုးလေး ပွန်းနေတာကအစ မှတ်မိနေသေး။ အနားရောက်လာတော့ သူ့သူငယ်ချင်းတယောက်က ကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီး “ဟေ့ကောင် ငါး ပြီးရင် ဘာလာလဲကွ” ဆိုပြီး ကိုယ်ရဲ့ သူလေးကို လှမ်းမေးတဲ့ အသံကို ကြားလိုက်တယ်။ အချိန်ကိုက်ဘဲဆိုပြီး အသည်းကွဲနေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေနဲ့ သူလေးကို ကြည့်လိုက်မယ်လဲဆိုပြီး ခေါင်းကိုအမော့ သူလေးဖြေလိုက်တဲ့ အဖြေက “အ အ အ အခြောက်” တဲ့ဗျာ။
အ အ အ ဆိုတဲ့စကားကို တမင်ထစ်ထားသလို လုပ်ပြောပြီးမှ နောက်ဆုံးစာလုံးကျမှ အခြောက်ကို မြန်မာ့အသံက ကြေညာသလို ပီပီသသကြီးနဲ့ အကျယ်ကြီးကို အော်ချလိုက်တာ။ နောက်ပြီး ကျနော့်မျက်နှာကို စေ့စေ့ကြည့်ပြီး ပြန်ဖြေတဲ့ အဖြေလေ။ နားထဲကို ဘင်ခရာတီးဝိုင်း ဆယ်ဝိုင်းလောက် တပြိုင်နက် တီးလိုက်သလိုဘဲ။
ကျနော့်မျက်နှာမှာ ထူပိန်းပြီး ဘယ်လိုရှက်သွားမလဲဆိုတာ စဉ်းစားသာကြည့်ပေတော့။ ပိုဆိုးတာက သူ့ သူငယ်ချင်းတွေက နောက်ဆက်တွဲ ဝိုင်းရယ်တဲ့ အသံတွေ အသံတွေ၊ ချက်ခြင်းမြေမျိုသွားရင်တောင် ကောင်းမှာဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတောင် ပေါက်မိတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးနည်းနဲ့ အဲဒီနေရာကနေ ထွက်လာမိမှန်းတောင် မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ နောက်ကနေ အပြေးလိုက်လာတဲ့ ဝါးကနဲ ဝါးကနဲ ရယ်သံတွေကြားမှာ မှတ်မှတ်ရရ ကျလာတဲ့ မျက်ရည်တစက်။
ဒီသတင်းက ဘယ်လိုပြန့်သွားလဲ မသိဘူး။ တကျောင်းလုံးမှာ ကိုယ့်ကိုတွေ့ရင် “ငါး ပြီးရင် ဘာလဲဟေ့”ဆိုတဲ့ စကားတွေကို မကြားတကြားတမျိုး နောက်သလိုလိုနဲ့ တိုးတိုးလေး ကပ်ပြောတာကတမျိုး အော်… ချစ်သူလေးပေးတဲ့ အရှက်ကွဲဇယားတွေပေါ့။
သူများတွေအတွက်တော့ ဒါလေးဟာ သာမန်အဖြစ်လေးလို့ ယူဆကောင်း ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခံရတဲ့ ကျနော့်အတွက် အထူးသဖြင့် ကိုယ်စစချင်း ရင်ခုန်ခဲ့ရတဲ့ ချစ်သူလေးက ပေးခဲ့တဲ့ ဒီလို လှောင်ပြောင်မှုက ရင်ထဲမှာ နင့်နင့်သီးသီး ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ လိင်တူချင်းချစ်သူလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စသိလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ စစချင်းခံလိုက်ရတဲ့ အထင်သေးလှောင်ပြောင်မှုက အခုအချိန်အထိ (၅) ဂဏန်းကို ရွတ်သံကြားရင် (၆) လို့ မထွက်လာဘဲ အ အ အ အခြောက်ဆိုတဲ့ အသံများ ထွက်လာမလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်က ရှိနေဆဲ။
စက်တင်ဘာ ၈ရက်နေ့၊ ၂၀၁၁ခုနှစ်။
ပိတ်လှောင်ခံရခြင်းရဲ့ ယိုစီးမှု ဒိုင်ယာရီ
ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ ဘဝအချစ်ရေးဟာ သာမန်လူသားတွေနဲ့ မတူဘူးလို့ သတိထားမိပါတယ်။ အဲဒီလို သတိထားမိတဲ့ချိန် အတောအတွင်းမှာကိုပဲ ကျွန်တော်ဟာ စိတ်ခြောက်ခြားမှုတွေ ထဲကနေ ရှင်သန်နေရ သလိုပါ။ လာမယ့် အနာဂတ်ဟာ မှုန်ဝါးနေတယ်။ ရှေ့ဆက်ဖို့ ခရီးဟာလည်း အရမ်းခက်ခဲ လှပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက် စိတ်ဒုက္ခတွေများပြီး လွတ်မြောက်ဖို့ ခက်ခဲလှပါရဲ့။
ကျွန်တော့်စိတ် အတွင်းပိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ အချစ်ဟာ ပင်လယ်ရေအောက် အနက်ဆုံးအပိုင်းမှာရှိတဲ့ ရေလှိုင်းလုံးလိုပဲ အားသန်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ရှိသမျှ ခွန်အားတွေနဲ့ အဲဒီ လှိုင်းလုံးတွေကို ဖိနှိပ်ထားရတာလေ။ ဒီလှိုင်းလုံးတွေ ရေမျက်နှာပြင်ထက်ကို တက်မလာစေဖို့ လူတွေ မမြင်အောင် ကာကွယ်ရတယ်။
လူတွေရဲ့ ပြောင်လှောင်ချင်တဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ ရယ်မောခံ ကဲ့ရဲ့ခံရမှာကို စိုးရွံ့ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး လက်ထပ်တဲ့နည်းနဲ့ ရုန်းထွက်နိုင်မယ်လို့ စဉ်းစားမိလာတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် လက်လျှော့လိုက်မိပါရဲ့။ ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုမှ မပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီအဖြစ်မျိုးဟာ မွေးရာပါလို့ဆိုတဲ့ အချစ်လား။ ဒါမှမဟုတ် ရက်တွေ လတွေ ကြာရှည်ပေါင်းစပ်ပြီး ဖြစ်လာတဲ့ အချစ်တွေလား ဆိုတာတွေကို ကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ အချစ်ဆိုတဲ့ အရာတစ်ခုဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်အတွင်းပိုင်းထိ အမြစ်တွယ်ခဲ့ရတယ်လို့ ခံစားရပါပြီ။ အသီးအပွင့်သာ မဝေဆာပေမယ့် သူ့အမြစ်တွေ ပင်စည်တွေက တဖြည်းဖြည်း ရှင်သန်အမြစ်တွယ် ကြီးထွားလာပါပြီ။
ဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာ ကျွန်တော်ဟာ အင်တာနက် ပင်လယ်အတွင်းမှာ လောကသစ် ဘဝသစ် တစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိ သွားတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေကို ဝလုံးဖြစ်သွားစေခဲ့တယ်။ ‘အာ….ဒီလောကကြီးမှာ ကျွန်တော့်လို အချစ်မျိုးတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ များပြားလှပါလား’ သူတို့ဟာ ကျွန်တော်နဲ့ အတူတူပဲ။
မူလမျက်နှာကို အားလုံးဖုံးကွယ် ထားကြတယ်လေ။ မျက်နှာဖုံးစွပ်ပြီး လူ့လောကမှာရှိတဲ့ လူသားတွေနဲ့ နေထိုင်နေရတယ်။ အများသူငါတွေထက် ဘဝလမ်းကြောင်းမှာ တစ်ခုပိုခက်ခဲရပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ ဘဝမျိုးလည်း နေထိုင်လို့ ရပါတယ်။
ကျွန်တော် ဒီတွေ့ရှိချက်ကို အံ့ဩဝမ်းသာမိရပါရော။ ကျွန်တော် နောက်ထပ် အထီးကျန်တယ်လို့ မခံစားရတော့၊ မှီခိုတွယ်တာမှုတွေ မရှိဘူးလို့လည်း မခံစားရတော့ဘူး။ အချိန်ရှိတာနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ အင်တာနက် လောကကြီးထဲမှာ ဝင်ထွက် သွားလာနေတာပေါ့။
အင်တာနက် လောကကြီးထဲက ဂေး(gay) သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်မှုတွေ ပြုလုပ်ပြီး အထီးကျန်နေတဲ့ ကွက်လပ်လေးကို ပြည့်အောင်ဖြည့်မိခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှစ်သိမ့်မှုတစ်ခု ရှာတွေ့လိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော့်အထင် အလင်းတန်း တစ်ခုကို တွေ့ရသလိုပါပဲ။ အလင်းတန်းထဲမှာ နစ်မြောနေခဲ့ပြီး ကျနော်ဘဝကို ကျေနပ်နေခဲ့တယ်လေ။
ကျွန်တော့်စိတ်ဟာ အရမ်းပျော်ရွှင်လာခဲ့ပါတယ်။ လူမှုဘဝ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေဟာ ကျွန်တော့် စိတ်အတွင်းထဲမှာတော့ မမျှတဘူးလို့ ခံစားမိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ သည်စက်ဝိုင်းအတွင်းမှာ ခံစားချက်တူညီတဲ့သူတွေ အချင်းချင်းဖြစ်နေလို့ အားနာ ရှက်ကြောက်ခြင်းတွေ မလိုပဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရှိကြတယ်လို့ ခံစားရတာပေါ့။
ကျနော်တို့တွေမှာ လူအများပြားနဲ့ မတူညီတဲ့ အချစ်မျိုးတွေ ရှိနေလို့ ကျနော်တို့တွေဟာ လူတွေရဲ့ နှာခေါင်းရှုံ့တာခံရသလို လူတွေရဲ့ မျက်လုံးထဲမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ထူးခြားနေ ရှုပ်ထွေးနေမှာပေါ့။ အများနဲ့မတူတဲ့ အချစ်မျိုးရှိတဲ့ ကျနော်တို့လို လူတွေကို လူတွေက ဝိုင်းဝန်းဖယ်ကျဉ် ထားကြတာလေ။ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ အဖျက်သမား၊ လူသတ်တရားခံတွေလို့ သူတို့က ယူဆထားကြတယ်လေ။
တကယ်တော့ ကျွန်တော် ဝန်ခံပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီစက်ဝန်းထဲမှာ (သူဌေး၊ ဆင်းရဲသား၊ ရုပ်ရည်ချောတာ၊ ရုပ်ဆိုးတာ၊ ပျော်ရွှင်တာ၊ ဝမ်းနည်းတာ စသဖြင့်) ကျောက်မျက်ရတနာနဲ့ ကျောက်စရစ်တွေ စသဖြင့် အရာဝတ္ထုပေါင်း မြောက်များစွာနဲ့ စုစည်းနေထိုင်တဲ့ စက်ဝန်းကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့လောကမှာလည်း ဒီလိုပဲ မဟုတ်လား။
တခြားနည်းနဲ့ စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ လူတွေကသာ ကျနော်တို့လို လူမျိုးတွေရဲ့ အချစ်တွေကို လူသားအချင်းချင်းချစ်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ တစ်ခုပါလားလို့ အကောင်းဖက်ဆောင်တဲ့ ရှုထောင့်တွေနဲ့ ကြည့်ပေးမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အချစ်ဟာ နေရဲ့ အလင်းရောင်အောက်မှာ ရှင်သန်နိုင်မှာပါ။
တစ်ခါက စာအုပ်တစ်အုပ်မှာ ဖတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ စိတ်ရောဂါကု ဆေးရုံးကြီးတစ်ခုက စိတ်ရောဂါ ခံစားနေရတဲ့ လူတယောက်က ဆရာဝန်ကို ‘လောကကြီးမှာ ကျွန်တော်သာ စိတ်မှန်တဲ့လူ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အားလုံးဟာ စိတ္တဇ ရူးနေတဲ့သူတွေ မဖြစ်ကုန်ဘူးလား’ ဆိုပြီး ဖြေခဲ့တယ် ဆိုတာကို ဖတ်ခဲ့ရတုန်းကတော့ ကျွန်တော် အရမ်းရယ်မောခဲ့ဖူးတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ အဲဒီစကားလေးကို တဖြည်းဖြည်း ပြန်တွေမိပြီး အရူးတယောက်ကကို ဒီလိုစဉ်းစားနိုင်သေးတာ မရူးတဲ့သူတွေက ဘာဖြစ်လို့များ ဒါကိုမတွေ့မိတာပါလိမ့်လို့ ဒီစကားလုံးကို ပြောခဲ့တဲ့ သူ့ကို အရမ်းချီးကျူးလေးစား မိခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြောင်းလဲလို့ မရဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြောင်းလဲဖို့ ဘယ်လိုမှ အားလည်းမရှိခဲ့ဘူး။ အားအင်တွေရှိလို့ ဘယ်လိုပဲ ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားနေပေမယ့်လည်း ဘယ်လိုမှ ပြောင်းလဲသွားမှာ မဟုတ်သလို ပြောင်းလဲဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။
မီးတောင်လိုပဲ ဟုန်းဟုန်းတောက်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သည်အချစ်မျိုးကို ကျွန်တော်တို့စေရာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ လူတွေကသာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အချစ်မျိုးကို ကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းနိုင်ရင်တော့ အာဒမ်နဲ့ ဧဝ စားခဲ့တဲ့ သစ်သီးဟာလည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ အပြင်းဆုံး ကာမဆေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စကားက အသုံးမဝင်တော့ဘူးပေါ့။
ဂေးတစ်ယောက်၊ ဒါမှမဟုတ် လိင်တူအချင်းချင်းကိုမှ ချစ်ကြိုက်ကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေဟာလည်း လူသားတွေပါ။ လူတိုင်းမှာ ရည်မှန်းချက် ရှိကြတယ်လေ။ ကျွန်တော်တို့တွေလည်း ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အချစ်မျိုးကို လိုချင်ကြတာပဲ။ ကျွန်တော်တို့တွေက ချစ်ခြင်းဆိုတဲ့ စိတ်ခံစားမှု တစ်ခုတည်းပဲ ကွဲပြားခဲ့တာပါ။ လူတိုင်းမှာ မိမိနေထိုင်ချင်တဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုဟန်ပန် ကိုယ်စီရှိကြတယ်လေ။ ဂေးတွေဟာလည်း ရောဂါဖြစ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
လူတွေက ကျွန်တော်တို့တွေကို ဘာဖြစ်လို့ နားမလည်ကြတာလဲ။ ကျွန်တော်တို့က ပတ်ဝန်းကျင်တွေကို မထိခိုက်စေချင်ဘူး။ ဒီလိုပဲ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း မထိခိုက်စေခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ကသာ ကျွန်တော်တို့တွေကို အမြဲထိခိုက်အောင် လုပ်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ပဲ နေထိုင်ရမှာလား။
အသက်အရွယ် ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ဒီအချစ်မျိုးနဲ့ လျှောက်လှမ်းလာရတဲ့ ဘဝခရီး တလျှောက်လုံးမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်လို့ ခံစားမိလာရတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်ဟာကျတော် လိင်တူချင်းကိုပဲ ကြိုက်ကြိုက် ဘာပဲဖြစ်နေပါစေ လူတွေရဲ့ ပြစ်တင်ပြောဆိုမှု တွေကိုလည်း ဂရုမစိုက်တော့ဘူး။
စိတ်အတွင်းမှာပဲ သိမ်းဆည်းသိုသိပ်ထားတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို ဖွင့်အန်ပြောချလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော် အရမ်းပေါ့ပါး လွတ်လပ်သွားတယ်လို့ ခံစားလိုက်ရတယ်။ ထိုနည်းအတူပဲ ကျွန်တော့်စိတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ စကားကိုလည်း ပြောထွက်ချင်ပါတယ်။ လူတွေက ဂေးတွေကို မှားယွင်းတဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ၊ အထင်သေးတဲ့ စော်ကားတဲ့ အကြည့်မျိုးတွေနဲ့ ထပ်မဆက်ဆံ စေဖို့ပေါ့။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် လူတွေရဲ့ ပွစိပွစိ ပြောဆိုမှုတွေက လူတစ်ယောက်ကို အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိ ဖြစ်စေနိုင်တယ်လေ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်တဲ့ စကားတစ်ခွန်း ထပ်ပြောချင်ပါသေးတယ်။ နေရာတိုင်း လုပ်ငန်းခွင်တိုင်းမှာ ဂေးတွေ ရှိကြတာပဲ။ သူတို့တွေက ကိုယ့်ကျတဲ့ နေရာကနေ တာဝန်တွေကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ကြတာပဲလေ။
တစ်ခါတစ်လေမှာ လူတယောက်ဟာ လိင်တူကိုမှ ချစ်ခင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သူတယောက် ဖြစ်နေပေမယ့် သူ့မှာ ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်တွေ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် သူတို့ လုပ်ငန်းခွင်မှာရှိတဲ့ လူတွေက သူ့ကို ချီးကြူးကြတာကို ခံရမှာပဲလေ။ တကယ်လို့ သူတောင်းစားတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း သူ့မှာသာ အစွမ်းရည် ရှိမယ်ဆိုရင် သူတောင်းစား အသိုင်းအဝိုင်းတွင်းမှာ အတော်ဆုံးဖြစ်နိုင်တာပဲ။
ဂေးတွေရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပေးဆပ်မှုတွေဟာလည်း သာမန်လူတွေထက် မသေးငယ်ပါဘူး။ သူတို့သည်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်နေသလိုမျိုး ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှု ခရီးတွေမှာ သူတို့ဟာလည်း မပါမဖြစ် ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ ကြတာပဲလေ။
ကျွန်တော် အချစ်ဆိုသော အရာကို ရှာဖွေနေခဲ့တာ ကြာလှပါပြီ။ တစ်ခါက ရယ်ဖူး၊ ငိုဖူး၊ ရင်လည်း နာခဲ့ဖူးပြီးပြီ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ဖူးစာကုန်ခဲ့ပြီလို့ ထင်ထားပြီးပြီ။ ကျွန်တော်ဘဝမှာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံ သင်ခန်းစာတွေနဲ့ ရင်းပြီးတော့မှ သေချာသိလိုက်ရတာ တစ်ခုရှိခဲ့ရတယ်။ အဲဒါကတော့ အကယ်၍ ဂေးတစ်ယောက်က သာမန်ယောက်ျား တစ်ယောက်ကို ချစ်မိခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲဒီကိစ္စက အရမ်းရင်နာဖို့ကောင်းတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပဲဆိုတာ။
ကျွန်တော်တို့ ဂေးတစ်စုက ညစ်ညမ်းညစ်ပတ်တယ်လို့ ထင်ချင်ထင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အဲသည့်ကိစ္စက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အစ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့လည်း ပုံမှန်ဘဝကို လိုချင်ကြတာပဲ။ ပုံမှန်လမ်းကို လျှောက်ချင်ကြတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
အမျိုးသမီး တစ်ယောက်က ကျွန်တော်တို့ကို ခံစားချက် ဘယ်လိုမှ မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ အဲဒါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမှားလား။ ကျွန်တော်တို့ ဂေးတွေဟာလည်း သွေးနဲ့သားနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ လူသားတွေပါ။ အချစ်နဲ့ သံယောဇဉ်နဲ့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာလည်း လူတစ်ယောက်ကို ချစ်ခွင့်ရဖို့ အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဂေးတစ်ယောက် ဖြစ်နေလို့ လူတစ်ယောက်ကို ချစ်ခွင့်ဆုံးရှုံးရမှာလား။
ဦးခေါင်းမှာ ဆံပင်ဖြူလေးတွေ ပေါက်နေတဲ့ မိဘကိုကြည့်ပြီးတော့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ နည်းနည်းတော့ ဝမ်းနည်းမှုကိုခံစား လာရတယ်။ အချိန်ရဲ့ စွမ်းအားတွေကို အရမ်းလည်း အံဩမိပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ဘာမှကို တားဆီးလို့ မရပါဘူး။ ကျွန်တော် လုပ်နိုင်တာ တစ်ခုကတော့ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်ပြီး မိဘကို ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခု ပေးနိုင်ခဲ့တယ် ဆိုတာပါပဲ။
သားတစ်ယောက် အနေနဲ့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကိုပေါ့။ ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်ရေး ကိစ္စမှာတော့ ကျွန်တော် စိတ်ကို ကျနော် ဘယ်လိုမှ ပြောင်းလဲအောင် ကြိုးစားလို့လည်း မရသလို ပြောင်းလည်း မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ ဒီ ဂေးဘဝကို အတည်ပြု ရွေးချယ်လိုက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့် ထပ်ပြီးတော့ အတုယောင်ဆောင် ပြောင်းလဲဖို့ စိတ်ကူးလည်း မရှိတော့ပါဘူး။
ဒီတစ်ချက်မှာတော့ ကျွန်တော့်မိဘတွေကို ပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော့်ကို သူတို့ နားလည်ပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူတို့လည်း ကျွန်တော့်ကို ချစ်လို့ပါပဲ။ ‘မင်းကိုချစ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ မင်းရဲ့ သာယာ ပျော်ရွှင်မှု တစ်ခုအတွက် သူ့အတ္တကို နည်းနည်းလျော့ပြီး လိုက်လျှောပေးတတ်မယ်ဆိုရင် မင်းရွေးချယ်လိုက်တဲ့ အချစ်ရေးကို လေးစား ပေးလိုက်ပါမယ်’ ဆိုပြီးတော့ ဖေဖေတို့က ပြောထားပါတယ်။
လိင်ကွဲအချစ်ဖြစ်စေ၊ လိင်တူအချစ်ဖြစ်စေ အချစ်ဆိုတာ အရမ်းမြင့်မားတဲ့ ပညာရပ် တစ်ခုပါပဲ။ အားလုံးထဲမှာမှ အနည်းငယ်သော လူတွေလောက်ကပဲ မွေးရာပါ ကံကြမ္မာနဲ့ ဖူးစာရှင်ဖက်တို့လောက်သာ သူတို့ရဲ့ အချစ်ကို အပြည့်အဝ ခံစားရတတ်ကြပါတယ်။ ကျန်တဲ့ အများစုကတော့ အချစ်ကို အငှားပြုပြီးတော့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နာကျင်အောင်သာ ပြုလုပ်နေကြတာတွေပါ။
ကိုယ် မင်းကိုချစ်တယ်၊ ကိုယ့်ကို မင်းပိုချစ်လာအောင် ဆိုတာမျိုး၊ ငါမင်းကို အရာရာ ပေးဆပ်ပါတယ်၊ မင်းလေးဆီက ပိုမိုသော ပေးဆပ်မှုကို ပြန်ပေးခိုင်းစေချင်တာ မျိုးတွေပဲ မဟုတ်လား။ ကျွန်တော် တစ်ခါက ဂေးအချစ်ကို ရိုးရိုးသားသား ချစ်ခဲ့ပါတယ်။ အကျိုးအမြတ်နဲ့ မျိုးဆက်ပြန့်ပွားရေး စတဲ့ အချစ်တွေနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ အရာတွေရဲ့ နှောက်ယှက်မှုတွေကို မခံစားခဲ့ရဘူး။
နောက်တော့ တွေ့တာများတော့လည်း ရိုးသွားခဲ့တာပါပဲ။ ဒီလိုပါပဲလေ အချစ်အမုန်း ပျော်ရွှင်မှု နာကျင်မှု တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှုနဲ့ တောင့်တမှု အားလုံးဟာ အတူတူပါပဲ။ လိင်တူအချစ်ဟာလည်း လိင်ကွဲအချစ်ထက် အဆင့်လည်း မမြင့်သလို အဆင့်နိမ့်တယ်လို့လည်း မရှိပါဘူး။
မယား သားသမီးကို စွန့်တဲ့ လိင်ကွဲအချစ်ရှိသလို၊ လူရှုပ်လူပွေ လိင်တူအချစ်မျိုးလည်း ရှိကြတာပဲ မဟုတ်လား။ လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးကြားမှာ စာပေစာတမ်းနဲ့ ပတ်သက်မှုကို ပြသကြသလို၊ ပတ်သက်မှု အပိုင်းသည်လည်း ဥစ္စာ အာဏာများ မဟုတ်ဘူးလား။ တစ်ခုတည်းသော အချစ်ဆိုတာကိုတော့ တစ်စုံတစ်ရာမှ ထိန်းချုပ်လို့ မရဘူးလေ။
လူတွေက ပြောကြပါတယ်။ သတိရခြင်းသည် စိတ်ဒုက္ခ တစ်ခုပဲတဲ့။ အဲလို စိတ်ဒုက္ခဆိုပြီး ခံစားရတဲ့သူကို ကျွန်တော့်အထင်ကတော့ အဲဒါ တစ်ဖက်သတ် သတိရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲ။ လူနှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် သတိရခြင်းဟာ ပျားရည်လို ချိုမြိန်တယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ ခါးသည်းတယ်ဆိုပြီး နည်းနည်းလေးမှ မခံစားရပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော် ဒီသူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးအတွက် ဆုတောင်းပါတယ်။ ကိုယ်တကယ် ချစ်တဲ့လူ ကိုယ့်ကိုပြန်ချစ်နေတဲ့ လူကိုသွားချစ်ပါ။ ဒီလိုမှသာ ချစ်ခြင်းနဲ့ ပြန်အချစ်ခံရတဲ့ ခံစားမှုကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
သစ္စာမဲ့တဲ့ လောကကြီးထဲမှာ ကျွန်တော့်လို သနားစရာကောင်းတဲ့ လူတွေ ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိမလဲဆိုတာ ကျွန်တော် မသိတော့ပါဘူး။ ကောင်လေး တစ်ယောက်ကို ချစ်နေတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်။ ချစ်ခြင်းကို လူတွေနဲ့ ပြောလို့မရ ခါးသည်းတဲ့ ခံစားမှုတွေကိုလည်း ပြောလို့မရ၊ နာကျင်တဲ့ ခံစားမှုကိုလည်း ပြောလို့မရ၊ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်တို့ရဲ့ စစ်ဆင်မှုတွေဟာ ဆီပူအိုးထဲ ရောက်နေသလိုမျိုးပဲ ခံစားရခက်လှပါတယ်။
တစ်ကြိမ်ပြီး တစ်ကြိမ် တစ်လှည့်ပြီးတစ်လှည့် ဖြူစင်လှတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ကို တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ ဒီလို မှီခိုရာမယ့် အချစ်မိုျး၊ ထုံကျဉ်မှု ကင်းမဲ့အချစ်မျိုး၊ ကောင်လေးရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ရှိနေစေခဲ့ပြီးတော့ လူတွေရဲ့ အမြင်မှာတော့ ယောက်ျားလေး သူငယ်ချင်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုဆိုပြီး သတ်မှတ်မှုတွေဟာ အလွန်ရက်စက်ခြင်းနဲ့ သစ္စာသွေဖယ်ခြင်း မဟုတ်လား…..။
Alex Aung (28-July-2011)
လိင်တူချစ်သူ အမျိုးသားစုံတွဲများအတွက် ဆက်ဆံရေး အဆင်ပြေစေမယ့် နည်းလမ်း (၈) သွယ်
Gay ဆိုရင် အမြင်တစ်မျိုးနှင့် ကြည့်တဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံချင်ကြတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းကြားမှာ ရုန်းကန်ခဲ့ရမှုတွေ၊ သည်းခံခဲ့ရမှုတွေ ပြီးတော့ စိတ်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီး လိင်တူချစ်သူ အမျိုးသားတစ်ယောက် အနေနဲ့ အချစ်စစ်ဆိုတာကို ကိုယ်လိုအမျိုးသား တစ်ယောက်ဆီမှာ ရှာဖွေမိတတ်ကြပါတယ်။ ဟုတ်တယ်! အချစ်စစ်ဆိုတာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီ။
လိင်တူချင်းဆက်ဆံသူ ကြိုက်နှစ်သက်သူ အမျိုးသားများဟာ ပညာပေး သို့မဟုတ် တစ်ခြားအမျိုးသားကို ဘယ်လိုချိန်းဆို တွေ့ဆုံရမယ် စတဲ့ နည်းပေးလမ်းညွှန်လေးတွေကို သိပ်လက်မခံချင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အတွက် ကျန်းမာစွာ၊ လန်းဆန်းပြီး တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အကျိုးပြုစေမယ့် ပေါင်းသင်းဆက်နွယ်မှုတွေ ရရှိဖို့ဆိုတာ လေ့လာစရာ သင်ကြားရေး အထောက်အကူပြု စာအုပ်စာတမ်းတွေ မရှိခဲ့တာကို သတိပြုမိကြမှာပါ။
ကိုယ့်ဘဝ နေထိုင်မှုပုံစံ၊ စိတ်ထား၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပုံစံနဲ့ အမြင်သဘောထားတွေချင်း တိုက်ဆိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးသော သူကို များသောအားဖြင့် ရှာဖွေတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နားလည်မှု၊ ကတိသစ္စာ၊ ပွင့်လင်းသော ဆက်ဆံရေးတွေက နှစ်ဦးကြားဆက်နွယ်မှုကို ပိုမိုခိုင်မြဲစေတာတော့ မမေ့သင့်ပါဘူး။
နောက်ပြီးတော့ လိင်တူချစ်သူ အမျိုးသားများရဲ့ နှစ်ဦးသား စပ်တူလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်မှုတွေမှာ အောင်မြင်ကြီးထွားမှုနဲ့ ရင်းနှီးမှု မြှင့်တင်ဖို့ အာရုံစိုက်ရမှာက သတိ္တရှိရှိ လုံ့လကောင်းစွာဖြင့် ရပ်တည်နေထိုင်ကြခြင်းလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောပြမယ့် နည်းလမ်းတိုလေးတွေက တိုတောင်းပေမယ့် လိင်တူချစ်သူ အမျိုးသားစုံတွဲများအတွက် သူတို့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ လျှင်မြန်ပြီး ထိရောက်မယ့် လမ်းညွှန်လေးတွေ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ အသေအချာ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒီလမ်းညွှန်လေးတွေကို စိတ်ထဲမှာ အမြဲထားပြီး သတိထား လုပ်ဆောင်မယ် ဆိုရင်ဖြင့် နှစ်ဦးသားအတွက် ခိုင်မာပြီး ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ အတူရပ်တည် နေနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါရစေ။
အောင်မြင်သော ဆက်ဆံရေး နည်းလမ်းလေးများကတော့
(၁) ကိုယ်စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှု အဆုံးစွန်တွေကို ကိုယ့်ပါတနာအပေါ် ထားရှိခြင်းအား ရှောင်ကြဉ်ရပါ့မယ်။ တစ်ယောက်ခြင်းဆီမှာ ကိုယ်ပိုင် ဘဝ၊ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံ များစွာကို ဖြတ်သန်းပြီး ရှင်သန်လာရတာဆိုတော့ တစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို တစ်ယောက်က အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေထိုင်ခြင်းက ဘဝသစ်တစ်ခုအတွက် အကောင်းဆုံး တိုးတက်လာမယ့် အားအင်ပါပဲ။
(၂) ကာလကြာရှည်စွာ အတူနေခဲ့ကြတယ်ထားဦး သင့်ပါတနာဟာ သင့်လိုအပ်ချက် ခံစားချက်တွေအားလုံး သိမြင်နေလိမ့်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ထားသင့်ပါဘူး။ စိတ်ဆန္ဒကို စိတ်ကူးသက်သက်ဖြင့် တွေးဆကြည့်ခြင်းနဲ့ ယူဆချက်များ ပြုလုပ်နေပါက ဖြစ်တည်လာမယ့် အလားအလာတွေကတော့ သဘောထားကွဲလွဲခြင်းများနဲ့ နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းများဆီ ဦးတည်နေပါလိမ့်မယ်။ ငါသိငါတတ် လုပ်နေတာထက် သင်လိုချင်တာ လိုအပ်တာရယ် ခံစားသိမြင်နေတဲ့ အရာတွေကို တစ်ဘက်သားအား ရိုးရိုးရှင်းရှင်း တိုက်ရိုက်မေးမြန်း ပြောဆိုလိုက်ဖို့ပါပဲ။
(၃) သင်နဲ့ သင့်ပါတနာရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအပေါ် ပြန်လည်စစ်ဆေးမှု လုပ်ဆောင်ခြင်းဟာ သင်တို့ ဆက်ဆံရေး အခြေအနေဟာ ဘယ်ကိုသွား နေတယ်၊ သင်နဲ့ သင့်ပါတနာတို့ ဘယ်လောက် ပျော်ရွှင်ကျေနပ်ခဲ့ရတယ် ဆိုတာတွေအပေါ် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရာ ရောက်ပါတယ်။ နှစ်ဦးသားကြား ဆက်သွယ်ရေး နည်းလမ်းတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထားကြခြင်းကလည်း နှစ်ဦးသားကြား ဆက်ဆံရေးအပေါ် သွေးသစ်လောင်းရာ၊ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဖုံးကွယ်မှုမရှိတဲ့ နယ်ပယ်များဆီ ဆုံးဖြတ်ချက် အမှားကင်းစွာ အတူလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြဖို့ ဖြစ်တည်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၄) နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရဲ့ ထူးခြားသောလက္ခဏာတွေ ဆက်သွယ်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေဟာ ပျားရည်ဆမ်းကာလမှာ အမြန်ဆုံးမြင့်တက်လေ့ ရှိပါတယ်။ စုံတွဲတွေအတွက် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတစ်ခုရဲ့ အစပျိုး အတွေ့အကြုံလေးတွေဟာ နှစ်ဦးသား စတင်ချိန်းဆိုတွေ့ ဆုံတဲ့နေ့ ကာလတွေကတည်းက ဖြစ်တည်ပါတယ်။ ဒါပုံမှန်ပါပဲ။ ပြီးတော့ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် တွယ်တာလွန်းမှုကြောင့် အမှားလို့ မဆိုသာတဲ့ စိုးရိမ်ရမှုလေးတွေ တွေ့ကြုံခံစားရတတ်ပါတယ်။
အဲဒီလို ခံစားရမှုလေးတွေ ဖြစ်ပေါ်ချိန်မှာ သင်တို့နှစ်ဦးသားရဲ့ ဆက်နွှယ်မှုနဲ့ လိင်မှုဘဝထဲကို ပို၍ဖန်တီးနိုင်စွမ်းနှင့် မရှိမဖြစ် လိုအပ်မှုလေးတွေ ပိုမိုဖြည့်စွက်ဖို့ ကြိုးစားခြင်းနဲ့ ရှေ့ဆက်ဖို့ အားအင်ဖြစ်စေမှာပါ။ သင့် ပါတနာကို အံ့အားတသင ့်ခံစားမှုလေးတွေ ရရှိကြည်နူး စေလိုက်ပါ။ ပင်ကိုယ် စေ့ဆော်မှုရဲ့ ထင်ဟပ်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုအဖြစ် ပျော်ရွှင်ပါစေ။ သူဟာ သင့်အတွက် ဘယ်လောက် အထူးအရေးပါသူ အရေးကြီးသူ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သူသိမြင်ခံစားပါစေ။
(၅) နှစ်ဦးသား ဆက်ဆံပတ်သက်မှုမှာ ဘယ် role က ပိုပြီး သင့်ကို ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှု ဖြစ်စေတယ် နေထိုင်ဖို့ အဆင်ပြေတယ် ဆိုတာ ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ လိင်တူဆက်ဆံသူ အမျိုးသားများရဲ့ တကယ့်အားသာမှု တစ်ခုကတော့ သာမန်ယောက်ျား မိန်းမစုံတွဲများလို တစ်ဖက်သတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ လက်ခံရသူများ မဟုတ်ဘဲ သက်တောင့်သက်သာ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း နေထိုင်နိုင်တာပါပဲ။ ကိုယ့်ပါတနာနဲ့ ကြိုက်တာ မကြိုက်တာ ဦးဆောင်တာ မှီခိုတာ ဘယ်လို role က အဆင်ပြေကြတယ်ဆိုတာ စေ့စပ်ဆွေးနွေး နေထိုင်ခြင်းက နှစ်ဦးသား ဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုအဆင်ပြေစေပါတယ်။
ဒီ Decision-making ကဏ္ဍမှာ နှစ်ဦးသားရဲ့ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်နှင့် ဗီဇသဘာဝကလည်း အရေးပါ ပါတယ်။ ထားပါလေ… ဘဝနေထိုင်မှု role သာမကဘဲ အိပ်ယာထဲက လိင်မှုကိစ္စ role ကလည်း ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေမယ့် အနေအထားကို ဦးစားပေးဖို့ သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်က ဘာပဲ သူကဘာပဲဆိုပြီး တစ်ဖက်သတ် မဟုတ်ဘဲ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အပြန်အလှန် ကျေနပ်စေနိုင်မှုက အရေးပါ ပါတယ်နော်။ နဂိုကတည်းက ဒါပဲ ဒါကိုကျေနပ်တယ် အဆင်ပြေတယ်ဆိုသူ စုံတွဲများအတွက်ကတော့ ပြောဖို့မလိုဘူးပေါ့လေ။
(၆) အရုပ်ဆိုးတဲ့ ကွဲလွဲမှုသဘောထားများ အထင်အမြင်လွဲမှုများဖြင့် စစ်ပွဲများဆင်နွှဲကြခြင်းက နောက်ဆုံး နောင်တဆိုတဲ့ အရာဆီ ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ ဒေါသ၊ စိတ်စောမှု၊ ယုံမှားသံသယတွေကို သဘောပေါက်နားလည်အောင် အရင်မကြိုးစားဘဲ တစ်ဖက်သားပေါ် ပေါက်ကွဲပြခြင်းက မပြုစကောင်းတဲ့ အရာပါ။ တကယ်လို့ ပေါက်ကွဲမိသွားရင်လည်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ပြန်လည်အဆင်ချောမည့် အကြောင်းတရားတွေကို ဖန်တီးလုပ်ဆောင်ရပါမယ်။
(၇) (ခုနှစ်ခုမြောက် အကြံပေးနည်းလမ်းကတော့ ကျွန်တော်တို့လို ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများနဲ့တော့ သိပ်မသက်ဆိုင်သေးဘူး ထင်ပါတယ်။ နှစ်ဦးသဘောတူ နေထိုင်ကြတယ်ထားဦး တရားဥပဒေအကြောင်းအရာအရ တရားဝင်ကိစ္စအဖြစ် လုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။) နှစ်ဦးသားရှေ့ရေး အာမခံချက်ရှိအောင် စီမံကိန်းချလုပ်ဆောင်ပါ။ နှစ်ဦးသားရဲ့ ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုကို တရားဝင်ဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။ မိမိပိုင် ပစ္စည်းများ၊ ဖြစ်တည်မှုများ၊ အကျိုးခံစားမှုများကို တရားဝင်အခိုင်အမာ သတ်မှတ်လို့ရအောင် ရှေ့နေရှေ့ရပ်ဖြင့် ဥပဒေကြောင်းအရ အကူအညီ ရယူလုပ်ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။ သာဓကအားဖြင့် နှစ်ဦးသားရှေ့ရေးအတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ဖို့၊ ရှေ့ရေး အာမခံချက် ပြည့်စေမယ့် အစီအစဉ်တွေကို ကြိုတင်စဉ်းစား ဆောင်ရွက်ထားဖို့ ဆိုတာမျိုးတွေကိုလည်း လုပ်ဆောင်ထားခြင်းဖြင့် ပေါင်းစည်းညီညွတ်တဲ့ နိုင်ငံသစ်အတွက် အရေးပါမှာပါ။
(၈) စီးပွားရေးကိစ္စတွေကြောင့် နှစ်ဦးသားကြား ရှုပ်ထွေးလာမယ့် အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်း ခွင့်မပြုသင့်ပါ။ အလုပ်အကိုင် စီးပွားရေး၊ တစ်ကိုယ်တည်းနေချိန်၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ၊ မိသားစုကိစ္စနဲ့ ကိုယ်တွေစုံတွဲအတွက် ဟန်ချက်ညီအောင် နည်းလမ်းကိုရှာဖွေလုပ် ဆောင်ထားရပါမယ်။ ဟိုးအရင် အစဦးကာလ နှစ်ဦးသား ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံတဲ့ ညလေးတွေတုန်းကလို အတူတူတွေ့ဆုံ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ ပြဿနာအဖုံဖုံ၊ အခက်အခဲ၊ ပြီးတော့ ရရှိမိတဲ့ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှုလေးတွေကို ပြောဆိုဆွေးနွေးကြရင်း တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်လေးအဖြစ် သီးသန့်ညတစ်ညကို အချိန်တစ်ခုကို ပုံမှန်ရယူဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။
အကြံဉာဏ်ပေးချက်ဆိုတာက သိပြီးသားလူတွေ အတွက်ကတော့ ဘာမှအရေးမပါပေမယ့် မသိသေးသူ စုံတွဲအသစ်လေးများအတွက် ကတော့ ကျွန်တော်ပြောဆိုချက်လေးတွေ အကြံဉာဏ်လေးတွေက သဲတစ်ပွင့် ဆားတစ်ဆုပ်လို အရေးပါမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ‘ဘဝ’ အထူးသဖြင့် လိင်တူချစ်ကြိုက်သူ အမျိုးသားစုံတွဲများအတွက် ‘ဘဝ’ဆိုတာက တာဝေးလက်ဆင့်ကမ်း အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုနဲ့ တူပါတယ်။ လမ်း တစ်ဝက်မှာ ရပ်လိုက်မှာလား တက်ညီလက်ညီ ပန်းတိုင်ဆီအရောက် ပြေးကြမှာလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. တာဝေးတစ်ခုကို လက်ဆင့်ကမ်း ပြေးနေတဲ့ အပြေးသမားအဖွဲ့ တစ်ခုအသွင် မှတ်ယူပြီး တက်ညီလက်ညီနဲ့ ဘဝပန်းတိုင်ကို အတူဖြတ်ကျော်သွားကြဖို့ ဖြစ်ကြပါစေကြောင်း လိင်တူနှစ်သက်သူ အမျိုးသားစုံတွဲများအတွက် အကြံလေးတွေ ပေးလိုက်ရပါတယ်။
Alex Aung (29 Aug 2011)
Reference: 8 Relationship Success Tips For Coupled Gay Men By Brian Rzepczynski
ကိုဖြိုးပဲ.. ပြန်ခေါ်လိုက်ပါတော့…။ သူတင်ပေးလိမ့်မယ်..။
ခွေးနဲ့ မြင်းနဲ့ နွားနဲ့ လိင်ဆက်ဆံချင်သူများကလည်း သဘာဝပါတဲ့၊ မွေးရာပါ ဗီဇမိုလို့ မတားသင့်ပါတဲ့။ ရှစ်နှစ်ကိုးနှစ်သား သမီးလေးများနဲ့ လိင်ဆက်ဆံရမှ အာသာပြေသူများကလဲ ဒီလိုပါပဲတဲ့။ ဒါကြောင့် ပွင့်လင်းစွာ လိင်တူချတာကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သူများဟာ လူမဆန်သူ အရိုင်းအစိုင်း အရူးများဖြစ်ပါတယ်။
ရိုင်းသွားရင်ခွင့်လွှတ်ကြပါခင်ဗျာ၊ အခြောက်ဆိုတဲ့ကောင်တွေက ဒီလိုပြောမှ သိကြမှာမိုလို့ပါ။
ကိုပေ့ ပိုစ့်က နာမည်စီးနေတာဖြစ်မယ်။ သာသာယာယာကနေ မသာမယာတွေဖစ်ကုန်ဘီ။